သုတေသနအရနုပျိုသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုသိသိသာသာမြင့်တက်လာခြင်းကိုအတည်ပြုသည်။ ယနေ့လူငယ်များသည်အင်တာနက် (streaming internet) ပေါ်ပေါက်လာချိန် မှစ၍ ED (နှင့်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ) သိသိသာသာမြင့်တက်လာသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ လူငယ်ယောက်ျားများအားလိင်မှုကိစ္စကိုအကဲဖြတ်သည့်လေ့လာမှုအားလုံးသည်သမိုင်းကြောင်းအရ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဆင့်နှင့်အစီရင်ခံစာအသစ်၏နိမ့်ကျသော libido နှုန်းကိုဖော်ပြသည်။
အနိမ့်လိင်စိတ် (hypo-လိင်) အတွက်နှုန်းထားများ 14% ကနေ 37% အရွယ်ရှိစဉ် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်း% 16 မှ 37 ထံမှမရသေးသည်လည်းရှိသည်။ လူပျိုတို့ကို ED ၏မြင့်မားသောနှုန်းထားခံစားနေရပြီးနေကြတယ်မည်သို့အရှိဆုံးသိသိသာသာဥပမာတစ်ခုမှာတစ်ဦးထံမှ အထီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေ၏သုတေသနစစ်တမ်း 2018 ထုတ်ဝေ: အထီး porn ကြယ် 37%, အသက်အရွယ် 20-29, (ထို IIEF erectile function ကိုများအတွက်စံ urology စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်) ပြင်းထန် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှအလယ်အလတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဟောင်း porn သရုပ်ဆောင်များကိုမှအငယ် porn သရုပ်ဆောင်များကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ:
အင်တာနက်မတိုင်မီ ED နှုန်းထားများ
ဤရွေ့ကားမြင့်မားသောနှုန်းထားများမကြာသေးမီကဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအမျိုးသားများအတွက် ED နှုန်းနှိုင်းယှဉ်စိန်ခေါ်မှုနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရာအစဉ်အလာအရ၊ ED နှုန်းသည်ငယ်ရွယ်သောလူငယ်များတွင်နည်းပါးသည်။ အသက် ၄၀ ကျော်ပြီးသည်အထိသိသိသာသာမြင့်တက်လာခြင်းမရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒတ်ခ်ျလေ့လာမှု နှိုင်းယှဉ် ကြိုတင် 2004 မှဒေတာ.
နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာ ED နှုန်းသည်မည်မျှအထိမြင့်တက်လာသည်ကိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်အတွင်း ED နှုန်းများကိုမတူညီသောတူရိယာများကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာခဲ့သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ခက်ခဲသည်။ သုတေသီအချို့ကမေးခွန်းတစ်ခု (ဟုတ်ကဲ့ / မဟုတ်) မေးခွန်းတစ်ခုမေးခဲ့ပြီး ED ရှိသူများကို၎င်း၏ပြင်းထန်မှုကိုတိုင်းတာရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အခြားသူများကမူ Likert အကြေးခွံများကိုအသုံးပြုသည့်လတ်တလောတူရိယာတစ်ခု၏ ၅-၆ မှမေးခွန်း ၆ ခုကိုအသုံးပြုကြသည်။ အဲဒါကို IIEF လို့ခေါ်တယ်။Erectile ရာထူးအမည်များ၏နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း) နှင့်ယနေ့ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုသည်။
သို့တိုင်သည်အခြားသုတေသီများကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ 2019 ခုနှစ်, ဘီဘီစီ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စစ်တမ်းကိုပြု၏ 1000 လူတွေ 18-25 ကျော်၏။ နှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းက porn ၏ 18-25 ကလိင်ဆက်ဆံဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်လျက်ရှိသည်ထင် watchers ။
သမိုင်းဆိုင်ရာ ED နှုန်းထားများ
အဘယ်အရာကိုအမျိုးမျိုးသောတူရိယာကို အသုံးပြု. peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာပေအတွက်ပညာရေး၏အခြားသမိုင်းဆိုင်ရာနှုန်းထားများကော? ပထမဦးစွာဤနေရာတွင်လိင်တက်ကြွစွာအမေရိကန်အမျိုးသားများတွင် ED အပေါ်2အဓိက Cross-Section လေ့လာမှုများကနေရလဒ်တွေကိုဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးအကြီးစားအင်တာနက်ထိုးဖောက်မှု predated ။
အဆိုပါ 1940s ခုနှစ်, Kinsey အစီရင်ခံစာနိဂုံးချုပ် ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့ခဲ့တာကြောင့် 1 ထက်လျော့နည်း% 30 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ငယ်ယောက်ျားအတွက်,3ထက်လျော့နည်း% သူတို့အား 30-45 ၌တည်၏။
တစ်ဦးက 1999 Cross-Section လေ့လာမှု (1992 ကိုသိမ်းယူပြီးဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီး) အနေဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းဂျာနယ် သာ၏အစီရင်ခံ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းများ 5%5% ၌၎င်း, အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ။ ကြောင်းလေ့လာမှုများတွင်စစ်တမ်းကောက်ယူလူတို့သညျများ၏အသက်အရွယ် 18 ထံမှ 59 အရွယ်ရှိဒါကြောင့်သူတို့ထဲကတစ်ဦးကိုတတိယ 40 အောက်မှာလိင်တက်ကြွယောက်ျားများအတွက်နှုန်းထားများဆိုလိုတာက 40, ကျော်ခဲ့ကြသည်နိမ့်ခဲ့ကြသည်။
2002 ဒတျချြတွင်သုတေသီများတစ်ဦးကိုပြု၏6အရည်အသွေးမြင့်ပညာရေးလေ့လာမှု Meta-analysis သည်။ ဥရောပကနေပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှု၏အားလုံး (5) ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်၏ 40 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အ ED နှုန်းထားများအစီရင်ခံတင်ပြ 2%။ အဆိုပါဆဋ္ဌချက်ချင်းအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်တဖြစ်ခဲ့သည်။
နည်းသောလိင်တက်ကြွသောအမျိုးသားများတွင် ED ရှိကြသည်
မှတ်ချက်: တိုင်းအသက်အရွယ်အုပ်စုတွင်လူအပေါငျးတို့အဘို့အ ED နှုန်းထားများလိင်တက်ကြွယောက်ျားများအတွက်နှုန်းထားများထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ ဥပမာ, အတွက် 1992 ဒေတာ လိင်မှုကိစ္စတက်ကြွသောအမျိုးသားများမှ ၁၈-၅၉ တွင် ED နှုန်းသည် ၅% သာရှိသည်။ သို့သော်ယောက်ျားများ (လိင်မှုကိစ္စနှင့်မရောနှစ်မျိုးလုံးပါ) သည်အမျိုးသားများအနက် ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၉ နှစ်အတွင်း ၇ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသား ၃၀-၃၉ တွင် ၉%၊ အမျိုးသား ၄၀-၄၉ တွင် ၁၁% နှင့်အမျိုးသား ၅၀-၅၉ တွင် ၁၈% ရှိသည်။ “ ပန်းသီးကိုပန်းသီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်” ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုတေသီအများစုနည်းတူလိင်အရတက်ကြွသောအမျိုးသားများနှုန်းကိုအာရုံစိုက်သည်။ ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကြောင့်လိင်ကိုရှောင်ကြဉ်သောလူငယ်များတွင် ED ရောဂါပြcountနာကိုကံမကောင်းစွာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများကိုပြန်လှည့်မီ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါဗေဒအကြောင်းအနည်းငယ်ပိုမိုနားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ED ကိုများသောအားဖြင့် psychogenic (သို့) အော်ဂဲနစ်ဟုသတ်မှတ်သည်။ အစဉ်အလာအားဖြင့်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ED သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များနှင့်ဆက်စပ်သည် (ဥပမာ၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိုးရိမ်ခြင်း) ။ အော်ဂဲနစ် ED သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ (ဥပမာ - အာရုံကြော၊ ဟော်မုန်းသို့မဟုတ်ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာ) နှင့်ဆက်စပ်သည်။
အသက် ၄၀ အောက်အမျိုးသားများ
40 အောက်မှာလူ ED အန္တရာယ်အချက်များအားစုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာရေး ပုံမှန်အားဖြင့်သာမန်အသက်ကြီးအတွက် ED နှင့်ဆက်စပ်သည့်အကြောင်းရင်းများကိုရှာဖွေရန်ပျက်ကွက်, ဆေးလိပ်သောက်, အရက်, အဝလွန်ခြင်း, အထိုင်များအသက်, ဆီးချို, သွေးတိုး, နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ, နှင့် hyperlipidemia ကဲ့သို့သော။ သငျသညျရှေ့အကြောင်းတရားများ၏ကိုဖတ်လျှင်အလွန်သံသယဖြစ် အော်ဂဲနစ် အသက်ကြီးအတွက်ပညာရေးလည်းနုပျို ED တစ်ဦးချွန်ထက်မြင့်တက်လာ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်၏။ အမျိုးမျိုးသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်တွေ vasculogenic သို့မဟုတ်• Neurogenic disease အာရုံကြော ED အဖြစ်ထင်ရှားစွာပြရန်အဘို့အဒါဟာနှစ်ပေါင်းကြာပါသည်။ အမှန်စင်စစ်တစ်ဦး လုလင်တို့သည်အတွက် ED အန္တရာယ်အချက်များမှာကွညျ့ရှု 2018 စက္ကူ ပုံမှန်အားဖြင့် ED စွန့်စားရသည့်အချက်များနှင့် ED နှင့်ပြproblemsနာမရှိသောသူများ (ပျမ်းမျှအသက် ၃၂ ​​နှစ်) တို့အကြားတွင်ကွဲပြားမှုမရှိပါ။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မှာ ED ရှိသူများသည်လိင်ဆန္ဒနည်းခြင်းနည်းခြင်းဖြစ်သည်။ သုတေသီများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းကိုမမေးမြန်းခဲ့ကြပါ။
အခုဆိုရင်ကျနော်တို့လူပျိုတို့ပေါ်ရှိအခြားမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ (အောက်တွင် ~ 40 နှင့်) ကိုလှည့်။ အဆိုပါ IIEF-5 တစ်ဦးအသုံးပြုခြင်း ဆွစ်ဇာလန်ယောက်ျား၏ 2012 Cross-Section လေ့လာမှု အသက် 18-24 တွေ့ရှိခဲ့ 30% ၏ ED နှုန်းထားများနှင့် 2010 ဘရာဇီးလေ့လာမှု 18-40 အစီရင်ခံယောက်ျား၏ 35% ၏ ED နှုန်းထားများ။ တစ်ဦးက 2013 အီတလီလေ့လာမှု အသစ်ကစတင်ခြင်း ED များအတွက်အကူအညီရှာကြံလေးလူနာတဦးတည်း 40 ထက်အသက်ငယ်ခဲ့ကြသည်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အံ့သြခြင်း, ပြင်းထန် ED ၏နှုန်းမှာ နီးပါးဖြစ်ခဲ့သည် အသက်အရွယ်နုပျိုသောယောက်ျားများတွင် 10% ပိုမိုမြင့်မား အသက် ၄၀ ကျော်အမျိုးသားတွေထက်
အဆိုပါ Florence urology ဆေးခန်းတက္ကသိုလ် 40 အောက်တွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ED လူနာစုစုပေါင်းလူနာလူဦးရေရဲ့အကြောင်းကို 5% ဖွဲ့စည်းကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ 2014-2015 အားဖြင့်ပညာရေးများအတွက်အကူအညီရှာကြံ 40 အောက်တွင်လူတို့သညျပထမဦးဆုံးအကြိမ်လူနာ 15% ဖွဲ့စည်း။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦး 2015 4,211 အီတလီအကြောင်းကိုစက္ကူ အဘယ်သူသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ပြင်ပလူနာအကူအညီကိုရှာဖွေ compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခဲ့ကြကြောင်းတွေ့ရှိ အငယ် အခြားယောက်ျားထက်နှင့်အဆင့်မြင့်ပညာရေး၏နှုန်းထားများ (နှင့်ဖွယ်ရှိအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှ masturbating ခဲ့ကြသည်) ရှိခဲ့ပါတယ်။
A 2014 လေ့လာချက် စစ်မှုထမ်းနှုန်းထားများခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံတက်ကြွတာဝန်အတွက် ED သစ် diagnoses ၏ နှစ်ဆထက် ပို. 2004 နှင့် 2013 အကြား။ psychogenic ED ၏နှုန်းထားများအော်ဂဲနစ် ED ထက်ပိုမိုတိုးမြှင့်ခြင်း, အမျိုးအစားမခွဲခြားထားသော ED ၏နှုန်းထားများအတော်လေးတည်ငြိမ်နျြရစျ။ တစ်ဦးက 2014 Cross-Section လေ့လာမှု တက်ကြွတာဝန်၏, 21-40 အသက်အတော်လေးကျန်းမာ, အထီးစစ်ရေး်ထမ်းတစ်ဦးခြုံငုံတွေ့ရှိခဲ့ 33.2% ၏ ED မှုနှုန်းအဆိုပါ IIEF-5 ကိုသုံးနိုင်သည်။ သူတို့ထဲကအကြောင်းတဝက်ကိုလည်း PTSD (ED များအတွက်လူသိများအန္တရာယ်အချက်) ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်ခုနှစ်တွင် စစ်ရေးလေ့လာမှု 2015 ထုတ်ဝေ, သုတေသီ ED နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန် နှင့် လိင်အင်္ဂါ Self-image ကို, အရာနှစ်ခုလုံးကိုအလွယ်တကူမိုးသည်းထန်စွာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှချည်ထားသောနိုငျသညျ။
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုလုံခြုံကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုအတွက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ တစ်ဦးက 2015 လေ့လာချက် 479 ယောက်ျား (အသက် 20.43 ဆိုလို) နမူနာရသောပြဿနာကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှု, အပေါ်လုလင် 62% တစ်ဦးစုစုပေါင်းကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုစဉ်အတွင်း unexplained စိုက်ထူအခက်အခဲများအစီရင်ခံ: နှစ်ဦးစလုံးစဉ်အတွင်း 13.8 ကွန်ဒုံးလျှောက်လွှာစဉ်အတွင်း%, ထိုးဖောက်မှုလိင်စဉ်အတွင်း 15.7% နှင့် 32.2% ။ (ဤ cross-section လေ့လာမှုမဟုတ်ခဲ့; သုတေသီများသူတို့ပြဿနာများနှင့်အတူသူတို့အား Over-နမူနာကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ )
နောက်တစ်နေ့လေ့လာမှုများပြုလုပ်ထုတ်ဖေါ် သညျ့အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ ထို့အပြင်လုလင်တို့သည်ထယခင်ကသီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။
A ကနေဒါဆယ်ကျော်သက်အပေါ် 2014 လေ့လာမှု 53.5-16 အသက်ယောက်ျား၏ 21% ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာပြလက္ခဏာတွေရှိသည်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, အသုံးအများဆုံး (27%) ခဲ့ အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (24%အော်ဂဇင်နှင့်အတူ), နှင့်ပြဿနာများ (11%) ။ အဆိုပါစာရေးဆရာနှုန်းထားများဒါမွငျ့မားခဲ့ကြအဘယ်ကြောင့်တျရှုပျထှေးနှင့်ယောက်ျားပေါင်းများအတွက်လိင်ကိစ္စကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းအစောပိုင်းကထုတ်ဝေစာပေအတွက်မတူဘဲအမျိုးသမီးလွန်ကဲအံ့သြသွားကြ၏။
အလားတူကနေဒါနိုင်ငံသုတေသီများဟာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ2နှစ် longitudinal လေ့လာမှု : 2016 အတွက်ထားတဲ့အတွက်သူတို့က2နှစ်တာကာလအတွင်းအများအပြားစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကျော် 16-21 ယခုနှစ်အောက်ပါရာခိုင်နှုန်းဟောင်းအထီးအစီရင်ခံကြောင်းတွေ့ရှိရ
အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှယောက်ျားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများမှာမတိုးတက်ခဲ့ပါ။ "မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ယောက်ျားတွေနဲ့မတူတာကအမျိုးသမီးဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးတက်မှုရဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ရုပ်ပုံလွှာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်။ သူတို့လေ့လာသင်ယူမှုနဲ့အတွေ့အကြုံကသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝကိုတိုးတက်စေဖို့အဓိကအခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ခဲ့တယ်" ထို့အပြင်ခိုင်မာသောခန့်မှန်းသူအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာသည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာဆက်ဆံရေးအခြေအနေဖြစ်သည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုရသေးသောဆယ်ကျော်သက်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများတွင်ပြaနာကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၃ ဆပိုများကြောင်း၊ လိင်ဆက်ဆံသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ” [ဘာသာရပ်အားလုံးသည်လိင်အရတက်ကြွစွာရှိသော်လည်းမည်သူသည်အများဆုံး porn ကိုအသုံးပြုမည်နည်း။ ]
A 2015 လေ့လာချက် အီတလီအထက်တန်းကျောင်းကျကွီးရှယျအိုမြား (18-19) ရက်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ 16% တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသုံးစွဲသူများ၏ဖော်ပြချက် သညျ့အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ။ အစီရင်ခံ non-porn အသုံးပြုသူများသည် 0% အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ.
တစ်ဦးက 2014 40 အောက်မှာ-Croatian ယောက်ျား၏စစ်တမ်း နှင့် 31% ၏အစီရင်ခံ ED နှုန်းထားများအောက်, 37% ၏အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှုန်းထားများ.
တစ်ဦးက 2015 လေ့လာမှု, porn7သို့မဟုတ်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ပတ်ကိုပိုပြီးနာရီသုံးပြီးကနေဒါလူတို့သညျဟုမေးသောတွေ့ရှိခဲ့ 71% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ခဲ့ 33% အခက်အခဲ orgasming သတင်းပို့အတူ။ ပျမ်းမျှအသက် 41.5 ။
ဤ ဗြိတိန်နိုင်ငံအကြောင်းကို 2018 ဆောင်းပါးလေ့လာမှုတစ်ခု သူတို့ရဲ့ 30s အတွက်လူနှစ်ယောက်အတွက်တဦးတည်းအနေနဲ့စိုက်ထူရတဲ့နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းရုန်းကန်ကြောင်းအစီရင်ခံ!
အတူတကွဤလေ့လာမှုများ (အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပြုသကဲ့သို့), အတော်လေးငယ်ရွယ်စတင်လတ်တလောလူ ED အတွက်တိုး ~ 40 နှင့်အောက်တွင်အဖြစ် anorgasmia ၏တုန်လှုပ်နှုန်းထားများနှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒီလေ့လာမှုတစ်ခုမှအင်တာနက်ယောက်ျားတွေရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းမပြုခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်အမျိုးသားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ် ၀ န်းကျင်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သို့သော်ငယ်ရွယ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတွင်တရားခံအဖြစ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုထောက်ခံသည့်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်သက်သေအထောက်အထားများဆက်လက်ရှိနေသည်။ ဤစာရင်းကိုကြည့်ပါ 39 လေ့လာမှုများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်အောက်ပိုင်း arousal မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn စွဲချိတ်ဆက်။ ဒီ list ထဲမှာပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများ causation သရုပ်ပြ သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေအဖြစ်။
အတိအကျကိုအသုံးပြု။ နှစ်ခုလေ့လာမှုများ တူညီတဲ့မေးခွန်းလွှာ: 2001 vs. 2011 (GSSAB)
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း (ဥပမာအားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတိုးပွားစေသည့်) နမူနာကြီးများကို အသုံးပြု၍ ED နှုန်းတိုးပွားလာမှုကိုပြသသည့်ငြင်းဆိုနိုင်သောသုတေသနအချို့ကိုလေ့လာသင့်သည်။ အမျိုးသားအားလုံးသည် ED နှင့်ပတ်သက်သည့်တူညီသော (ဟုတ်ကဲ့ / မဟုတ်) မေးခွန်းတစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာ့လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလေ့လာမှု (GSSAB) ၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ 13,618 နိုင်ငံများတွင် 29 လိင်တက်ကြွယောက်ျား။ ဒါက 2001-2002 အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာပြီးနောက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် GSSAB မှ“ လိင်မှုဆိုင်ရာအခက်အခဲများ” (ဟုတ် / မဟုတ်) ကိုပင်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည် ခရိုအေးရှား, နော်ဝေနဲ့ပေါ်တူဂီအတွက် 2,737 လိင်တက်ကြွယောက်ျား. 2001-2002 အတွက်ပထမဦးဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့, ခဲ့ကြသည် အသက် 40-80. ဒုတိယအုပ်စု 2011 အတွက် 40 နှင့်အောက်မှာရှိကြ၏။
ကြိုတင်လေ့လာမှုတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတအသက်ကြီးသူ၏ရမှတ်မှုမရှိခြင်းကိုပါပြီသင့်ပါတယ်လူပျို, ထက်ဝေးပိုမိုမြင့်မား ED ရမှတ်များရှိသည်မယ်လို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ရုံဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမှာတော့အမှုအရာအခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ ယောက်ျား 2001-2002 များအတွက် 40-80 ED နှုန်းထားများ 13% အကြောင်းကိုခဲ့ကြသည် ဥရောပမှာ။ 2011 အသုံးပြုပုံဥရောပတိုက်သားအတွက် ED နှုန်းထားများ, အသက်အရွယ် 18-40, 14-28% ကနေအရွယ်ရှိ!
ဤအချိန်အတောအတွင်းအမျိုးသားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အဘယ်အရာပြောင်းလဲသွားသနည်း။ ကောင်းပြီ၊ အဓိကအပြောင်းအလဲများမှာအင်တာနက်ထိုးဖောက်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် streaming porn သို့ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ထို့နောက်ကြည့်ရှုရန်စမတ်ဖုန်းများ) တို့ဖြစ်သည်။ ခရိုအေးရှား၊ နော်ဝေနှင့်ပေါ်တူဂီတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်လေ့လာမှုတွင်ပေါ်တူဂီ၌ ED နိမ့်ဆုံးနှုန်းနှင့်နော်ဝေလူမျိုးများသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း အင်တာနက်ထိုးဖောက်မှုနှုန်း ပေါ်တူဂီအတွင်းကနော်ဝေတွင် 67% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသာ 95% ရှိကြ၏။
အောက်ကပုံရိပ်တစ်ခု၌ထငျရှား MedHelp ထံမှ ED ပို့စ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ဖိုရမ်များ။ “ ဖိုရမ်တွေမှာတင်တဲ့အမျိုးသား ၆၀% ဟာ ၂၄ နှစ်အောက်လူငယ်တွေပါ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုယေဘုယျအားဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုဒဏ်ခတ်သည့်အခြေအနေဟုယူဆရသောကြောင့်၎င်းသည်သုတေသီများအတွက်အံ့အားသင့်စရာတွေ့ရှိချက်ဖြစ်သည်။ ”
An အိုင်းရစ် Times သတင်းစာ စစ်တမ်း ED နှင့် ပတ်သက်. စာဖတ်သူများထောင်ပေါင်းများစွာ၏မေးနှင့်ပြဿနာများနှင့်အတူယောက်ျား 24-34 ၏နံပါတ် 28% ဖြစ်ခဲ့သည်:
ယောက်ျား 2015-35 ထက်လုလင်တို့အတွက်ပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းကိုပြသပေးသော ED နှုန်းထားများတွေ့မှ 49 အိုငျးရစျ Times သတင်းစာစစ်တမ်းကနေဂရပ်ဖစ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ!
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖြတ်ပြီးနောက် ED နှင့်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကနေပြန်လည်နာလန်ထူ၏အကြောင်း 3,000 Self-အစီရင်ခံစာများကဤစာမကျြနှာပျေါတှငျတှေ့ရှိနိုငျ:
ပြန်ဖွင့်အကောင့်အသစ်များ၏ စာမျက်နှာ ၁, စာမျက်နှာ2နှင့် စာမျက်နှာ 3.
ED ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပုံပြင်များ စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ 3, စာမျက်နှာ 4, စာမျက်နှာ 5, စာမျက်နှာ 6, စာမျက်နှာ7နှင့် စာမျက်နှာ 8.
1,947 ယောက်ျားအတွက်ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့ 35.0% ခဲ့သည် (73.7% ပျော့, ပြည့်စုံ / 26.3% အလယ်အလတ်) ။ အဆိုပါ IIEF-5 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ခေတ် 18-24 ။ (အားလုံးဆွစ်ဇာလန်အမျိုးသားရေးအထီးအဘို့မဖြစ်မနေ) ဆွစ်ဇာလန်စစ်တပ်။ အဆိုပါ IIEF-5 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ 30% ၏ ED နှုန်းထားများ
နယူးစတင်ခြင်း ED မူလတန်းရောဂါ 114 ၌တွေ့အဖြစ် (26%) ယောက်ျား 40 နှစ်ပေါင်း≤။ လုလင်နီးပါးတစ်ဝက်အဟောင်းတွေလူနာအတွက်နှိုင်းယှဉ်နှုန်းထားများနှင့်အတူပြင်းထန်သော ED ထံမှခံစားခဲ့ရသည်။
အထီးတက်ကြွစွာအစိတ်အပိုင်းဝန်ဆောင်မှုအင်္ဂါတို့တွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, အမေရိကန်တပ်မတော်နေ့, 2004-2013 (2014) ။
တက်ကြွတာဝန်စစ်မှုထမ်းအတွက်ပညာရေး၏နယူး diagnoses နှုန်းထားများထက်ပိုမို 2004 နှင့် 2013 အကြားနှစ်ဆခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။
ခေတ် 16-21 ။ Erectile အလုပ်မဖြစ် - 27%; အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ - 24%; အော်ဂဇင်နှင့်အတူပြဿနာများ - 11% ။ အဆိုပါ IIEF-5 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ခေတ် 21-40 ။ အဆိုပါ IIEF-5 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ 33% ၏ ED နှုန်းထားများ
အသက်အရွယ် 40 နှင့်အောက်မှာ။ 33% ၏ ED နှုန်းထားများ။ အဆိုပါ IIEF-5 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Associated Younger လိင်ကွဲအမျိုးသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူဖြစ်သနည်း (2015)
ဥရောပတိုက်သား, 18-40 ။ အဆိုပါ GSSAB (2011) မှတစ်ဦးက Yes / No ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို။ ED နှုန်းထားများ 14% -28% မှမရသေးသည်လည်းရှိသည်။ 37% သကဲ့သို့မြင့်မားသောအနိမ့်လိင်စိတ်နှုန်းထားများ။
သူတို့က2နှစ်တာကာလအတွင်းအများအပြားစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကျော်တွေ့ရှိခဲ့ရသော2နှစ် longitudinal လေ့လာမှု, 16-21 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး၏အောက်ပါရာခိုင်နှုန်း: အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (48%), အနိမ့်အလိုဆန္ဒ (46%), erectile function ကိုအတွက်ပြဿနာများ ( 45%) ။ အဆိုပါ IIEF-5 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အထီး porn ကြယ် 37%, အသက်အရွယ် 20-29, ပြင်းထန် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှအလယ်အလတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ IIEF-5 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အသက် ၁၈ မှ ၄၀ အတွင်းယောက်ျားလေးများ၏ ၂၄.၆% သည် ED ရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ IIEF-24.6 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသုံးစွဲမှုသည်လူငယ်များတွင်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသလား။ နိုင်ငံတကာ web-based စစ်တမ်းတစ်ခုအပေါ် အခြေခံ၍ ဘက်စုံကွဲပြားခြားနားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
အသက် ၁၈-၄၅ အရွယ်လိင် ၂၀၆၇ အမျိုးသား ၂၀၆၇ တွင် ၂၁.၅% သည် ED ဖြစ်သည်။ IIEF-21.5 ကိုသုံးသည်။
ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်လိင် / လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်နှိုးဆွမှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလေ့လာမှုများ
အောက်ကလေ့လာမှုများအပြင်, ဒီစာမျက်နှာ 140 ကျွမ်းကျင်သူများကကျော်အားဖြင့်ဆောင်းပါးများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုပါရှိသည် အသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသကြသူ (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ။ ပထမဦးဆုံးအ7လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေအဖြစ်:
ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာပေများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ယူအက်စ်ရေတပ်ဆရာဝန် ၇ ဦး ပါ ၀ င်ပြီး၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသည်လူငယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများမြင့်တက်လာကြောင်းဖော်ပြသည့်နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမှတစ်ဆင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖော်ထုတ်သောအမျိုးသားများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆေးမှတ်တမ်း ၃ ခုသည်ဆရာဝန်များကဖော်ပြသည်။ အမျိုးသားသုံး ဦး အနက်နှစ် ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖျက်သိမ်းခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြတ်တောက်မှုများကိုကုသပေးခဲ့သည်။ တတိယလူသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်တိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
လက်ရှိဥက္ကiat္ဌဖြစ်သောပြင်သစ်စိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည် Sexology ၏ဥရောပအဖွဲ့ချုပ်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြားကပြန်နှင့်ထွက်သည့်စိတ္တဇဆိုင်းနေစဉ်, ဒါကြောင့်သူကအများအားဖြင့်ရည်ညွှန်းရဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့် porn-သွေးဆောင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် anorgasmia) ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ် anorgasmia နှင့်သူတို့ကိုကူညီရန်သူ၏ကုထုံးချဉ်းကပ်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီးသူကို 35 လူတို့နှင့်အတူသူ၏စာတမ်းသည်သူ၏လက်တွေ့အတွေ့အကြုံကိုလှည့်ပတ်နေသည်။ စာရေးသူကသူ၏လူနာအများစုသည်ညစ်ညမ်းစာကိုသုံးကြသည်၊ အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ပြpornနာများ၏အဓိကအကြောင်းရင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည် (တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကနာတာရှည် ED ကိုမဖြစ်စေဘူးဆိုတာကိုသတိရပါ။ ၎င်းကို ED ၏အကြောင်းရင်းအဖြစ်ဘယ်တော့မှမပေးပါ) ။ အမျိုးသား ၃၅ ယောက်အနက် ၁၉ ယောက်ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာသိသိသာသာတိုးတက်လာတာတွေ့ရတယ်။ ကျန်တဲ့အမျိုးသားတွေကတော့ဆေးကုသမှုကိုမခံတော့ဘဲပြန်နေဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။
ဤစာတမ်းပါဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု ၄ ခုအနက်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ (လိင်စိတ်နည်းခြင်း (လိင်စိတ်နည်းခြင်း၊ fetishes၊ anorgasmia)) အကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမှ ၆ ပတ်တာကိုရှောင်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ၈ လအကြာတွင်အမျိုးသားသည်လိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှု၊ လိင်မှုကိစ္စနှင့်အော်ဂဇင်ကိုအောင်မြင်စွာရရှိခြင်း၊ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမှပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏ပထမဆုံးသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သောမှတ်တမ်းဖြစ်သည်။
“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အလေ့အကျင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းသောအခါသူသည်ယခင်ကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် မှစ၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုနေစဉ်တက်ကြွစွာနှင့်လျင်မြန်စွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်မူလကအဓိကအားဖြင့်သတ္တဗေဒနှင့်သတ္တဝါများဖြစ်သောနှောင်ကြိုး၊ လွှမ်းမိုးခြင်း၊ နောက်ဆုံးတွင်သူသည်ဤအရာများကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးပိုမိုပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားလိင်လိင်, orgies နှင့်အကြမ်းဖက်လိင်ပါဝင်သည်။ သူသည်လိင်အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်မုဒိမ်းမှုများကိုတရားမဝင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကို ၀ ယ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်ထိုစိတ်ကူးများကိုမိန်းမများနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်စိတ်ကူးကြည့်သည်။ သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့စိတ်ကူးယဉ်စွမ်းရည်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကြိမ်နှုန်းကိုလျှော့ချခဲ့တယ်။ ”
နှောင့်နှေးသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်း (anorgasmia) အတွက်အကြောင်းရင်းများနှင့်ကုသမှုကိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ "ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပွားမှု" နှစ်ခုအပေါ်တစ် ဦး အစီရင်ခံစာ။ “ လူနာ B” သည်ကုထုံးဖြင့်ကုသသောလူငယ်များကိုကိုယ်စားပြုသည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာမှာစာတမ်းကလူနာ B ၏“ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ခက်ခဲသောအရာများအဖြစ်သို့ရောက်သွားသည်” ဟုဖော်ပြသည်၊ စာတမ်းကညစ်ညမ်းနှေးကွေးသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုသည်အဆန်းမဟုတ်၊ လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှု၏ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုလေ့လာရန်စာရေးသူမှတောင်းဆိုထားသည်။ ၁၀ ပတ်ကြာညစ်ညမ်းမှုမရှိသောလူနာဘီ၏ကြာရှည်သုက်လွှတ်မှုကိုကုသပေးခဲ့သည်။
ဤဆောင်းပါးသည်ထို့ကြောင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစတိုင်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းဖို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစတိုင်နှင့်ဆက်စပ်မူကြောင်းကိုယခင်သုတေသနထောက်ခံပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာကုသသူများ၏ DE နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း၏အောင်မြင်မှုများကိုပညာရပ်ဆိုင်ရာစာပေများတွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမရှိသလောက်အားဖြင့်နိဂုံးချုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် DE ၏ကုသမှုကိုခက်ခဲသောရောဂါတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရန်ခက်ခဲသည်။ အဆိုပါဆောင်းပါးတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသို့သုတေသနနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်လိင်အင်္ဂါ desensitisation အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဘို့ရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ညစ်ညမ်းစေသည့်သုတ်ရည်ထွက်မှုအကြောင်းဖော်ပြသည်။ လက်မထပ်မီခင်ပွန်းသည်၏တစ်ခုတည်းသောလိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူသည်လိင်အရလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းထက်လိင်စိတ်စူးစူးဝါးဝါးမှုနည်းသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည် သတင်းအချက်အလက်၏အဓိကအပိုင်းမှာ "ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခြင်း" နှင့်စိတ်ကိုကုထုံးသည်သူ၏ anejaculation ကိုကုသရန်ပျက်ကွက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဲဒီလို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုတွေမအောင်မြင်တဲ့အခါ၊ နောက်ဆုံးတွင်ဤတားမြစ်ချက်သည်သူ၏ဘ ၀ တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်လက်တွဲဖော်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်သန္ဓေတည်ခြင်းကိုအောင်မြင်စေခဲ့သည်။
တွေ့ရှိချက်များကိုအင်တာဗျူး ၁၁ ခုနှင့်ဗွီဒီယိုဒိုင်ယာရီနှစ်ခုနှင့်စာသားဒိုင်ယာရီသုံးခုအပေါ်အခြေခံသည်။ အမျိုးသားများသည်အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၅၂ နှစ်အတွင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်း (များသောအားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်) ကိုနေ့စဉ်စားသုံးခြင်းဖြင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ (ဥပမာအားဖြင့်အကြမ်းဖက်မှုဒြပ်စင်များပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာ) ကိုနှိုးဆွမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်အထိသတင်းပို့သည်။ လိင်မှုနှိုးဆွမှုသည်အလွန်အမင်းမြန်ဆန်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်သီးသန့်ဆက်စပ်မှုရှိခြင်းအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနှင့်စိတ် ၀ င်စားမှုမရှိသောအခါအရေးပါသောအဆင့်သို့ရောက်ရှိသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်လက်တွေ့ဘ ၀ မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်စိုက်ထူခြင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစွန့်လွှတ်။ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်နေကြသည်။ ၎င်းသည်အချို့သောအမျိုးသားများသည်စိုက်ထူမှုအောင်မြင်ရန်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့ရန်သူတို့၏စွမ်းရည်ကိုပြန်လည်ရရှိစေခဲ့သည်။
7) ကိုယ်ပိုင်ခံစားပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုလိင်ကွဲအမျိုးသားများရဲ့အတွေ့အကြုံများ (2019): ရှက်ကြောက်ခြင်း Hidden
အထီးညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူ ၁၅ ယောက်၏လူတွေ့မေးမြန်းခန်း။ အမျိုးသားအတော်များများသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၊ သုံးစွဲမှုအရှိန်မြင့်လာခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာပြsexualနာများကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်။ မိုက်ကယ်အပါအဝင်လိင် - လိင်မှုကိစ္စပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောကောက်နုတ်ချက်များသည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများအတွင်းသူ၏လိင်မှုပြုမှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေပြီး၊
ဘယ်အချိန်မှာငါ 19 [မှာဆရာဝန်ထံသို့သွားလေ၏။ ။ ။ ] သူ Viagra သတ်မှတ်ထားသောနှင့် [ငါ့အပြဿနာ] ​​ရုံစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ တခါတရံအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်တခါတရံတွင်မအမှုကိုပြု၏။ ဒါဟာပြဿနာ porn [ခဲ့ငါ့အားပြကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးသုတေသနနှင့်စာဖတ်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ။ ငါလူငယ်တစ်ဦးသည်ဆိတ်သငယ်အဖြစ်ဆရာဝန်ကိုသွားနှင့်သူသည်ငါ့ကိုအပြာရောင်ဆေးလုံးပြဋ္ဌာန်းခဲ့လျှင်။ ], ထို့နောက်ငါအဘယ်သူမျှမကယ့်ကိုကအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တူသောခံစားရတယ်။ သူကကျွန်မကို Viagra ပေးခြင်း, ငါ၏ porn အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. မဟုတ်တောင်းဆိုနေတာရပါမည်။ (23, အလယျပိုငျးအဘိဓါန် Eastern, ကျောင်းသား)
သူ၏အတွေ့အကြုံကြောင့်မိုက်ကယ်သည်ထိုမိသားစုဆရာဝန်ဆီသို့ဘယ်တော့မှပြန် သွား၍ သူ၏ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းသုတေသနကိုစတင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူသည်သူ၏အသက်အရွယ်နှင့်အလားတူလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖော်ပြသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုသူတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယင်းကသူ့ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေခဲ့သည်။ မိမိအညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရန်ကြိုးပမ်းအောင်ပြီးနောက်, သူ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်စပြုလာသည်။ သူကတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသူ့ရဲ့စုစုပေါင်းအကြိမ်ရေကိုလျှော့ချမပြုခဲ့သော်လည်း, သူသည်သူတို့သာဖြစ်ရပ်၏ထက်ဝက်ခန့်အဘို့အညစ်ညမ်း watched ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူကညစ်ညမ်းနှင့်အတူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေါင်းစပ်အဆပမာဏကို halving အသုံးပြုပုံမိုက်ကယ်သူသိသိသာသာမိန်းမနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းမိမိအ erectile function ကိုတိုးတက်စေရန်နိုင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
ပါ ၀ င်သူများကရှာဖွေသောဆရာဝန်များနှင့်အထူးကုများသည်ဇီဝဆေးဝါးဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများကိုသာကမ်းလှမ်းပုံရသည်။ ဤသည်စာပေ (Tiefer, 1996) အတွင်းဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်တစ်ခုချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏အမျိုးသားများမိသားစု ၀ င်များထံမှရရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကုသမှုသည်မလုံလောက်ဟုမှတ်ယူရုံသာမကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီများကိုထပ်မံရယူခြင်းမှလည်းသူတို့ကိုခွဲထုတ်ထားသည်။ ဇီဝဆေးပညာဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများသည်ဆရာဝန်များအတွက်အများဆုံးသောအဖြေဟုထင်ရသော်လည်း (Potts, Grace, Gavey, & Vares, 2004)၊ ပို၍ ဘက်စုံနှင့်ဖောက်သည်ဗဟိုပြုချဉ်းကပ်မှုလိုအပ်သည်။ အမျိုးသားများကမီးမောင်းထိုးပြသည့်ပြissuesနာများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းမှဖြစ်နိုင်သည်။
ဥပမာ, ပန်းခြံများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2016) , အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်စေခြင်းငှါရှာတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုလျော့ကျခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်စိတ်လျော့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာပါဝင်သူသူတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမှစွပ်စွဲထားတဲ့ဆင်တူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်, အစီရင်ခံတင်ပြ။ ဒံယလေကသူတစ်ဦးစိုက်ထူရကိုစောင့်ရှောက်ရန်မတတျနိုငျသညျ့၌သူ၏အတိတ်ဆက်ဆံရေးအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်။ သူဟာညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သည့်အခါဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အဘယ်သို့ဖြစ်သနည်းမှနှိုင်းယှဉ်မရသူ့ရည်းစား '' အလောင်းတွေနဲ့သူ့ရဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆက်နွယ်:
8) Dual Control Model - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်အပြုအမူများတွင်လိင်ဆိုင်ရာတားမြစ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၀၇)
အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချ။ ဗွီဒီယိုညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုသည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်လူငယ် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်နှိုးဆွခြင်းသို့မဟုတ်စိုက်ထူခြင်းများမလုပ်နိုင်ပါ နှင့် porn (ပျှမ်းမျှအသက် 29 ခဲ့သည်) ။ အဆိုပါတုန်လှုပ်သုတေသီများအမျိုးသား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ,
9) အင်တာနက်ညစ်ညမ်း (2008) နဲ့လက်တွေ့တွေ့ဆုံ
စိတ်ရောဂါဆရာဝန်မှရေးသားထားသောလက်တွေ့ရောဂါလေးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောစက္ကူ။ သူသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုသူ၏အမျိုးသားလူနာများအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောဆိုးကျိုးများကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ အောက်ပါကောက်နုတ်ချက်က ၃၁ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးသည်အစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းသောလိင်သို့ကူးစက်သွားသည်ကိုဖော်ပြသည်။ သူသည်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သည်းခံခြင်း၊ အရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုကိုဖော်ပြသည့်ပထမဆုံးသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရောထွေးစိုးရိမ်စိတ်ပြဿနာများအတွက်သရုပ်ခွဲ psychotherapy အတွက်တစ်ဦးက 31 နှစ်အရွယ်အထီးကြောင်းအစီရင်ခံ သူသညျမိမိလက်ရှိမိတ်ဖက်များကနှိုးဆွလိင်ဖြစ်လာအခက်အခဲကြုံနေရခဲ့သည်။ အမျိုးသမီး၊ သူတို့၏ဆက်ဆံရေး၊ ငုပ်လျှိုးနေသည့်ပconflictsိပက္ခများသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးသောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ (ဆွေးနွေးချက်အတွက်စိတ်ကျေနပ်လောက်ဖွယ်ရှင်းပြချက်မပါဘဲ) နှင့် ပတ်သက်၍ များစွာဆွေးနွေးပြီးနောက်သူသည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းတခုကိုအားကိုးအားထားပြုခဲ့သည့်အသေးစိတ်ကိုပြောကြားခဲ့သည်။ အတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးသူသည်သူမနှစ်သက်သောသူတစ် ဦး ဖြစ်လာသည့်အင်တာနက်အပြာစာပေဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တွေ့ခဲ့သည့်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများပါ ၀ င်သည့်စူးစမ်းမှုတစ်ခု၏“ မြင်ကွင်းတစ်ခု” ကိုသူဖော်ပြခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးအတော်များများတွင်သူသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ် မှစ၍ ကြိုကြားကြိုကြားစေ့စပ်ထားသည့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ၏အသုံးပြုမှုနှင့်သက်ရောက်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်လိင်မှုနှိုးဆွရန်အလို့ငှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းအပေါ်ပိုမိုမှီခိုအားထားခြင်း၏ရှင်းလင်းသောဖော်ပြချက်များပါဝင်သည်။ သူသည်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမည်သည့်အထူးပစ္စည်း၏မဆိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်သက်ရောက်မှုများကို“ သည်းခံနိုင်မှု” ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်ကြိုတင်လိုချင်သောလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုရရှိနိုင်ရန်ပစ္စည်းအသစ်များကိုရှာဖွေသည်။
သူသည်ယခင်ကသူအသုံးပြုခဲ့ဖူးခြင်းမရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြောင့်သူအားနှိုးဆွနိုင်ကြောင်းကိုလည်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သူကလွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ကသူဟာစအိုနဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ဖို့သိပ်စိတ်မ ၀ င်စားကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်ဤပစ္စည်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ အလားတူပင်သူသည်“ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောသို့မဟုတ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုနီးပါး” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသော“ တုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်း” ဟုသူဖော်ပြခဲ့သောအကြောင်းအရာသည်ယခုသူထံမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သော်လည်း၎င်းအကြောင်းအရာသည်စိတ် ၀ င်စားစရာမရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒီဘာသာရပ်အသစ်တွေနဲ့အတူသူဟာသူဟာနှိုးဆော်ခြင်းခံရမှာဖြစ်သလိုစိတ်ပူပြီးမသက်မသာတွေ့ခဲ့ရတယ်။
10) ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကာလအတွင်းလိင်မှုဆိုင်ရာအရအနှောင့်အယှက်ပေးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများ၊ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လူငယ်လူကြီးများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်း။ (2009)
ယခုလေ့လာမှုသည်လက်ရှိလိင်မှုကိစ္စအသုံးပြုမှု (လိင်ဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာ - SEM) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများအကြားဆက်စပ်မှုနှင့် (lat 6-12 ကာလ) (အသက် ၆ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အတွင်း) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ခြင်းများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှပါဝင်သူများ၏ပျမ်းမျှအသက်မှာ ၂၂ နှစ်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်နေစဉ်၊ အောင်းနေချိန် (အသက် ၆ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အတွင်း) တွင်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ -
11) နော်ဝေလိင်ကွဲစုံတွဲ (2009) ၏ကျပန်းနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း
12) ဆိုက်ဘာ-porn မှီခို: အီတလီအင်တာနက် Self-အကူအညီနဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ရောက်သောအသံ (2009)
ဒီလေ့လာမှုကဆိုက်ဘာမှီခိုသူများ (noallapornodipendenza) အတွက်အီတလီ self-help အဖွဲ့ ၀ င် ၃၀၂ ဦး မှရေးသားထားသောမက်ဆေ့ခ်ျ ၂၀၀၀ ကိုဇာတ်ကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ်အစီရင်ခံသည်။ နှစ်စဉ် (၂၀၀၃-၂၀၀၇) မှသတင်း ၄၀၀ ကိုနမူနာယူခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောကောက်နုတ်ချက်များ။
13) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, လိင်ပုံများ (2013) ကရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ်
ဤသည် EEG လေ့လာမှုမွှမ်းတင်ခဲ့သည် မီဒီယာ porn / လိင်စွဲလမ်း၏တည်ရှိမှုဆန့်ကျင်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်။ မရဒါ. သံမဏိ et al။ 2013 အမှန်တကယ်ဆင်း-ထိန်းညှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ porn စွဲများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံး၏တည်ရှိမှုဖို့ထောက်ခံမှုချေးငှားသည်။ ဘယ်လိုနည်းဖြင့်? အဆိုပါလေ့လာမှုကိုပိုမိုမြင့်မား EEG ဖတ်အစီရင်ခံတင်ပြ (ကြားနေဓါတ်ပုံတွေကိုမှဆွေမျိုး) ဘာသာရပ်များခေတ္တညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံနှင့်ထိတွေ့သောအခါ။ လေ့လာရေးတသမတ်တည်းစွဲသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သော (ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေကဲ့သို့) တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးမွငျ့မား P300 ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသပါ။
ယင်းနှင့်အတူအညီ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဦးနှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့လာမှုများ, ဒီ EEG လေ့လာမှု လည်း ပူးပေါင်းလိင်များအတွက်လျော့နည်းအလိုဆန္ဒနှင့်အတူ correlating porn ပိုမို cue-reactivity ကိုအစီရင်ခံတင်ပြ။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင် ဦး နှောက်ကိုညစ်ညမ်းစေသည့်အခွင့်အလမ်းများသောသူများသည်တကယ့်လူတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းထက်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်, လေ့လာမှုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နီကိုးလ် Prause "မြင့်မားတဲ့လိင်စိတ်" porn အသုံးပြုသူများသည်မျှသာရှိခဲ့ကြောင်းအခိုင်အမာမရှိသေးပါလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပြောပါ အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက် (ပူးပေါင်းလိင်များအတွက်ဘာသာရပ်များ '' အလိုဆန္ဒဟာသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းကျဆင်းနေခဲ့သည်) ။
14) ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက် (2014)
မက်စ်ပန့်ခ်ျအင်စတီကျု့တွင်လေ့လာမှုအရစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုသည်ညစ်ညမ်းမှုပမာဏနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ vanilla porn ကိုတိုတောင်းသောထိတွေ့မှု (.3 second) အားတုန့်ပြန်သောအားဖြင့် porn သည်ပိုမိုများပြားသောဆုလာဘ် circuit လုပ်ဆောင်မှုကိုသုံးစွဲလေသည်။ တစ် ဦး 530 ဆောင်းပါးခဲစာရေးဆရာ၌တည်၏ ဆီမှKühnကပြောပါတယ်:
15) နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ်
ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဒီ fMRI လေ့လာမှုကမူးယစ်ဆေးစွဲသူများအတွက်အသိသာထင်ဟပ်စေသောညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများအတွက်အထိခိုက်မခံမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများသည်လက်ခံထားသောစွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိရသည် မဟုတ် ပိုပြီး "က" like နှိပ်။ အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူအခက်အခဲရရှိစိုက်ထူ / arousal ခဲ့: အဆိုပါသုတေသီများလည်းဘာသာရပ်များ၏ 60% (25 ပျှမ်းမျှအသက်) ထိုအစီရင်ခံတင်ပြ porn ကို အသုံးပြု. ၏ရလဒ်အဖြစ်သို့သော်လည်း, porn နှင့်အတူစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ဘူး။ လေ့လာမှုကနေ ( "CSB" compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေဖြစ်ပါတယ်):
16) ပြImagesနာရှိသောသုံးစွဲသူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အလားအလာများ“ Porn စွဲ” နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောထိန်းချုပ်မှုများ (၂၀၁၅)
ကနေတစ်ဦးကစက္ကန့် EEG လေ့လာမှု နီကိုးလ် Prause ရဲ့အဖွဲ့။ ဒီလေ့လာမှုကမှအ 2013 ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်လျှင် သံမဏိ et al။ , 2013 (သေးပါကအထက်အမည်ရှိတူညီသောအတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုခံစားခဲ့ရ) အနေနဲ့အမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်အုပ်စု။ ရလဒ်: ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် "သူတို့ porn ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများကြုံနေရတစ်ဦးချင်းစီ" vanilla por ၏ဓါတ်ပုံများကိုတစက္ကန့်ထိတွေ့မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုခဲ့ဎ။ အဆိုပါ ခဲစာရေးသူက "ဒီရလဒ်တွေကိုမလုပ်ပဲporn စွဲ debunk။" ဘာ တရားဝင်သိပ္ပံပညာရှင် သူတို့ရဲ့တည်းသောပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှုတစ်ခု debunked မူကြောင်းကိုတောင်းဆိုမယ်လို့ လေ့လာမှုကောင်းစွာထူထောင်လယ်ပြင်?
17) မြီးကောင်ပေါက်နဲ့ web porn: လိင်၏ခေတ်သစ်တစ်ခု (2015)
ဒီအီတလီလေ့လာမှုကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအထက်တန်းကျောင်းသားကြီးများအပေါ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ urology ပါမောက္ခမှပူးတွဲရေးသားသည် Carlo Foresta, မျိုးပွားမှုရောဂါဗေဒ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းဥက္ကpresident္ဌ။ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးက ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးစားသုံးသူများ၏ ၁၆% သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအလွန်နည်းပါးသည်ဟုအစီရင်ခံကြသည်။ ၎င်းသည်စားသုံးသူမဟုတ်သူများ၏ ၀% နှင့် (တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ထက်နည်းသောစားသုံးသူများအတွက် ၆%) နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ လေ့လာမှုမှ
“ ၂၁.၉% ကဒါကိုပုံမှန်လို့သတ်မှတ်တယ်။ ၁၀% ကဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအစစ်အမှန်မိတ်ဖက်များအပေါ်လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုကိုလျှော့ချပေးသည်ဟုအစီရင်ခံသည်။ [ကျန်တဲ့] ၉.၁% ကဆေးစွဲနေတယ်။ ထို့အပြင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲသူများ၏ ၁၉% သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုအစီရင်ခံကြသည်။ […ဤ] ရာခိုင်နှုန်းသည်ပုံမှန်စားသုံးသူများအကြား ၂၅.၁% သို့မြင့်တက်ခဲ့သည်။"
18) 115 ဆက်တိုက်အမျိုးသားဖြစ်ပွားမှုတစ်ဦးကဘက်စုံဇယားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2015): Hypersexuality လွှဲပြောင်းအမျိုးအစားအားဖြင့်လူနာလက်ခဏာ
နာတာရှည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းစသည့် hypersexuality မမှန်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်အမျိုးသားများ (ပျမ်းမျှအသက် ၄၁.၅) အမျိုးသားများအတွက်လေ့လာမှုတစ်ခု။ အမျိုးသား ၂၇ ယောက်ကို“ ရှောင်လွှဲနိုင်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” ဟုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းမှုဖြင့်တစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်ပတ်လျှင် ၇ နာရီအထက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ နာတာရှည် porn မှ masturbated သူယောက်ျား၏ 71% 33% အစီရင်ခံနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် (porn-သွေးဆောင် ED ရန်ရှေ့ပြေး) နဲ့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာများကိုသတင်းပို့.
19) ယောက်ျားရဲ့လိင်ဘဝနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှပြန်လုပ် Exposure ။ တစ်ဦးကနယူးပြဿနာ? (2015)
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုအမျိုးသားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအခြားသဘောထားများ (ဤသည်မှာအမျိုးသားများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်) ။ ရေရှည်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အထူးသဖြင့်တစ် ဦး ချင်း၏လက်တွဲဖော်နှင့်အော်ဂဇင်မရောက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်နေစဉ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်လိင်ဆက်ဆံမှုအများစုကိုသုံးသူတစ် ဦး သည်သူ၏ ဦး နှောက်နှင့်၎င်း၏သဘာဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ကြိုးပမ်းသည်။ orgasm ရရှိရန်အတွက်သူသည်မကြာမီအမြင်အာရုံကိုလှုံ့ဆော်ရန်လိုအပ်သည် (Doidge, 2007) ။
အမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဥပမာ - ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုသူနှင့်ပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ အော်ဂဇင်သို့ရောက်ရှိရန်အခက်အခဲ၊ သုတ်ရည်ထွက်စေရန်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများလိုအပ်ခြင်းစသည်တို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများဖြစ်လာသည်။ ဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများသည်လနှင့်ချီ။ ကြာနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အော်ဂဲနစ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာဆိုင်ရာ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသော်လည်း၎င်းသည်အော်ဂဲနစ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုမဟုတ်ပါ။ အရှက်ရခြင်း၊ အရှက်ရခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခံရခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေသောဤရှုပ်ထွေးမှုများကြောင့်အမျိုးသားများသည်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့်တွေ့ဆုံရန်ငြင်းဆန်ကြသည်။
20) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ဘယ်လိုအတော်များများအခန်းကဏ္ဍ: တာရယ်လိင်ကွဲအမျိုးသားများနှင့်အတူများထဲတွင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire လျော့နည်းသွား? (2015)
21) Erectile အလုပ်မဖြစ်, ပျင်းတာဟာနှင့်နှစ်ဦးကိုဥရောပနိုင်ငံများကနေစုံတွဲအမျိုးသားများအကြား Hypersexuality (2015)
စစ်တမ်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် hypersexuality ၏အစီအမံများအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်စပ်မှုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု erectile လည်ပတ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားဆက်စပ်မှုဒေတာချန်လှပ်ပေမယ့်သိသိသာသာဆက်စပ်မှုမှတ်ချက်ချသည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
22) ကိုယ်ပိုင်နားဆင်နိုင်ပါတယ် Hypersexual အပြုအမူ (2015) နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့တစ်ခုအွန်လိုင်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အကဲဖြတ်, စိတ်ဓာတ်, နှင့်လိင်စရိုက်များ Variables ကို
ဤတွင်ဖော်ပြထားသောအခြားလေ့လာမှုများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည့်အများသဘောဆောင်သောခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေဖြင့် Porn / sex စွဲသူများသည်ပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်လိင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု (erectile disfunction ကိုကြုံတွေ့ရမှာကိုကြောက်ခြင်း) နှင့်ပေါင်းစပ်။ ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှု (၎င်းတို့၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောစွဲလမ်းမှုများ) ကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
23) အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ: ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်ပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာအသုံးပြုမှုပုံစံများတစ်ခုကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု (2016)
ထိပ်တန်းသုတေသနတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှဒီဘယ်ဂျီယံလေ့လာမှုကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းဟာ erectile function ကိုလျော့နည်းစေပြီး၊ သို့တိုင်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်စွဲလမ်းမှုများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ အမျိုးသား ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဤလေ့လာမှုသည်အရှိန်မြင့်တက်နေသည်ဟုအစီရင်ခံရသည်။ယခင်ကသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းမဟုတ်ခဲ့။ "(ကိုကြည့်ပါ လေ့လာမှုတွေ ) porn အသုံးပြုမှု porn နှင့်တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့လေ့ / desensitization သတင်းပို့ကောက်နုတ်ချက်:
24) ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးဟာဒိုင်းနမစ်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှု (2016)
အခြားသောလေ့လာမှုများစွာကဲ့သို့ပင်တစ်ကိုယ်ရေသုံးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကိုတင်ပြကြသည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေနှင့် ပတ်သက်၍ Negative Effect Dimension PCES အတွက်သိသာသောကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။ သို့သော် tဒီနေရာမှာ Sex Life subscale နဲ့သိသာထင်ရှားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်။ [ဤနေရာတွင်] ကြိမ်နှုန်းမြင့် Porn အသုံးပြုသူများသည် Low Frequency Porn သုံးစွဲသူများထက်ဆိုးကျိုးများပိုများကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။
25) ပြောင်းလဲအစာစားချင်စိတ်အခြေအနေများနှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်သွယ်မှု (2016)
“ အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ” (CSB) သည်ယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းစွဲသူများဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ တစ်ပတ်ကို ၂၉ မိနစ်ခန့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာက CSB ဘာသာရပ် ၂၀ မှ ၃ ခုသည်အင်တာဗျူးသူများကို“ အော်ဂဇင် - စိုက်ထူသောရောဂါ” ခံစားခဲ့ရကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
26) ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လျှော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြား Associative လမ်းကြောင်း (2017)
ဒီလေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးစာရင်းထဲတွင်တွေ့ရှိရသည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုလူအများစုကလိင်မှုနှိုးဆွမှုရရှိစေရန်အခွင့်အလမ်း (သို့မဟုတ်လိုအပ်မှုရှိခြင်း) နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းလည်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
27) "ငါကနည်းလမ်းများစွာအတွက်အနုတ်လက္ခဏာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခဲ့ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာကိုယ်ကသုံးပြီးရပ်တန့်လို့မရဘူးထင်တယ်": ငယ်ရွယ်သြစတြေးလျ (2017) ၏နမူနာအကြားကိုယ်ပိုင်ဖော်ထုတ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု
15-29 အသက်သြစတြေးလျ၏အွန်လိုင်းစစ်တမ်း။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခဲ့ဖူးသူများ (n = ၈၅၆) ကို 'ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကမင်းရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သလဲ' ဟူသောအဖွင့်မေးခွန်းဖြင့်မေးခဲ့သည်။
အဆိုပါဖွင့်မေးခွန်းတစ်ခုကို (ဎ = 718) မှတုန့်ပြန်တဲ့သူသင်တန်းသားများကိုအနက်ပြဿနာအသုံးပြုမှု 88 ဖြေဆိုသူများက Self-ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို, arousal နှင့်ဆက်ဆံရေးအပေါ်: ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုအစီရင်ခံတင်ပြသူကိုအထီးပါဝင်သူသုံးဒေသများရှိသက်ရောက်မှုမီးမောင်းထိုးပြ။ တုံ့ပြန်ချက် (အမျိုးသား, ဘိုးဘွားရိပ်သာ 18-19) "ငါကနည်းလမ်းများစွာအတွက်အနုတ်လက္ခဏာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခဲ့ထင်ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာကိုယ်ကသုံးပြီးရပ်တန့်လို့မရဘူး" ပါဝင်သည်။ အမျိုးသမီးပါ ၀ င်သူအချို့ကပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်လည်းတင်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည်အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရခြင်းနှင့်အရှက်ရခြင်းများကဲ့သို့သောအပျက်သဘောခံစားချက်များကိုဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအတင်းအဓမ္မများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဥပမာ - အမျိုးသမီးပါ ၀ င်သူတစ် ဦး ကအကြံပြုသည်။ “ အဲဒါကကျွန်မကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရစေပြီးရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သွားနိုင်အောင်ငါဘယ်လိုလိုအပ်သလဲဆိုတာငါသဘောမကျဘူး၊ ကျန်းမာရေးလည်းမကောင်းဘူး။ ” (အမျိုးသမီး၊ အသက် ၁၈-၁၉)
28) လုလင်တို့သည် (2017) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အော်ဂဲနစ်နှင့် psychogenic အကြောင်းတရားများ
"နှောင့်နှေးသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းအတွက်ညစ်ညမ်း၏အခန်းကဏ္ ((DE)" လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းနှင့်အတူဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်။ ဤအပိုင်းမှကောက်နှုတ်ချက် -
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများပျံ့နှံ့မှုနှင့်သုံးစွဲမှုများပြားလာခြင်းသည် DE ၏အကြောင်းအရင်းများကိုတိုးပွားစေသည်။ ၎င်းသည် Althof ၏ဒုတိယနှင့်တတိယသီအိုရီနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ပျမ်းမျှယောက်ျားလေး ၁၄.၄% သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်အစီရင်ခံစာများသည် ၁၃ နှစ်မပြည့်မီညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် ၅.၂% သောသူများသည်အနည်းဆုံးနေ့စဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းကိုပြသခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်လေ့လာမှုတစ်ခုအရဤတန်ဖိုးများသည် ၄၈.၇% နှင့် ၁၃.၂% အထိအသီးသီးတိုးတက်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည် DE ကို CSB ကိုပြသသောလူနာများနှင့်ဆက်ဆံခြင်းမှတစ်ဆင့်အထောက်အကူပြုသည်။
Voon et al ။ CSB ရှိလူငယ်များသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သောအရွယ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီး ၄ င်းတို့သည်အသက်အရွယ်ထိန်းချုပ်ထားသောရွယ်တူချင်းများထက်ပိုမိုကြည့်ရှုခဲ့ကြသည် ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း CSB ရှိလူငယ်များသည် Althof ၏တတိယမြောက် DE သီအိုရီကိုခံရနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၌နှိုးဆွမှုမရှိခြင်းကြောင့်လက်တွဲဖော်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရွေးချယ်ကြသည်။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုနေသောအမျိုးသားအရေအတွက်သည် Althof ၏တတိယသီအိုရီအားဖြင့် DE ကိုအထောက်အကူပြုသည်။ အထီးကောလိပ်ကျောင်းသား ၄၈၇ ယောက်ရဲ့လေ့လာမှုမှာ Sun et al ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လက်တွေ့မိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရင်းနှီးသောအပြုအမူများလျော့နည်းသွားခြင်းတို့ကြောင့်အကြားဆက်စပ်မှုများတွေ့ရှိရသည်။
ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်လိင်ဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုများမှတစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကို ဦး စားပေးရွေးချယ်ရန်မြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိသည်။ ဤသည်ကို Park et al အားဖြင့်တစ် ဦး အမှုအစီရင်ခံစာတွင်အတွက်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ အသက် ၂၀ အရွယ်စစ်မှုထမ်းရသည့်အမျိုးသားတစ် ဦး သည်ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လကသူ၏စေ့စပ်ထားသူနှင့်အော်ဂဇင်ရရန်အခက်အခဲရှိခဲ့သည်။ အသေးစိတ်လိင်ဆိုင်ရာသမိုင်းကလူနာသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုအားကိုးကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သူကလိင်အင်္ဂါကိုလိင်အင်္ဂါမှအတုလုပ်ပြီးအသုံးချပြီးလိင်အင်္ဂါကိုအသုံးချခဲ့တယ်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအော်ဂဇင်အတွက်ဂရပ်ဖစ်ပုံသဏ္orာန်နှင့်သရုပ်သဏ္natureာန်တူသောသဘောသဘာဝကိုလိုအပ်လာခဲ့သည်။ သူကသူ့စေ့စပ်မှုကိုဆွဲဆောင်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ သူကပိုမိုမှန်ကန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
အင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုနိုင်မှုတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်လူငယ်များသည် Althof ၏ဒုတိယသီအိုရီအရ DE ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ ဤသည်ကိုအောက်ပါဖြစ်ရပ်အစီရင်ခံစာတွင်သရုပ်ပြနေသည်။ Bronner et al ။ သူ့ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်မရှိကြောင်းတိုင်ကြားမှုများကိုတင်ပြသည့်အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်ကျန်းမာသောလူတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ သူမသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်း၊ အသေးစိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဇ ၀ င်ကဒီအဖြစ်အပျက်ဟာသူချိန်းတွေ့ရန်ကြိုးစားခဲ့သည့်လွန်ခဲ့သောအမျိုးသမီး ၂၀ နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ သူသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက zoophilia၊ ကျွန်ခံခြင်း၊ sadism နှင့် masochism ပါဝင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်ကိုသူအစီရင်ခံခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူသည်လိင်၊ လိင်အင်္ဂါများနှင့်အကြမ်းဖက်သောလိင်များသို့ပြောင်းလဲလာသည်။ သူသည်သူမစိတ်ကူးထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမိန်းမများနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်မြင်ယောင်ကြည့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်တဖြည်းဖြည်းအလုပ်မလုပ်တော့ပါ။
လူနာ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လက်တွေ့ဘ ၀ များအကြားကွာဟချက်သည်ကြီးမားလွန်းသဖြင့်လိုချင်တောင့်တမှုလျော့နည်းသွားသည်။ Althof ၏အဆိုအရ၎င်းသည်အချို့သောလူနာများတွင် DE အဖြစ်ဖော်ပြလိမ့်မည် ။73 ဤထပ်ခါတလဲလဲပုံသဏ္graphicာန်သည်ပုံရိပ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝကိုပိုမိုဆိုးရွားလာစေမည့်အော်ဂဇင်ကို Park et al မှသတ်မှတ်သည်။ အဖြစ် hyperactivity။ အမျိုးသားတစ် ဦး သည်မိမိ၏လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ပုံသဏ္sensာန်ကျလာသည်နှင့်အမျှအစစ်အမှန်ဘဝရှိလိင်သည်သုက်ပိုး (သို့မဟုတ် ED ၏ဖြစ်ရပ်တွင်စဉ်ဆက်မပြတ်စိုက်ထူခြင်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်) အတွက်သင့်တော်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းများကိုမလုပ်ဆောင်တော့ပါ။
29) ညစ်ညမ်း ပို. ပို. ထိခိုက်ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံရေး Brno ရဲ့တက္ကသိုလ်ဆေးရုံလေ့လာမှု (2018) ကပြောပါတယ်
ဒီဟာချက်ခ် ဤ YBOP စာမျက်နှာတွင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သတင်းတိုတိုတိုပါရှိသည်။ ၎င်းသည်ဆေးရုံဝက်ဘ်ဆိုက်မှပိုမိုကြာရှည်သောသတင်းထုတ်ပြန်ချက်၏ဂူဂဲလ်ဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်သည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှကောက်နုတ်ချက်များ။
လူငယ်များစွာသည်သူတို့ကြည့်နေသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြောင့်ဖန်တီးထားသောဒဏ္ofာရီများကြောင့်သာမန်ဆက်ဆံရေးများအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသူအမျိုးသားများသည်ဆက်ဆံရေးတွင်ကိုယ်ထိလက်ရောက်မလှုပ်ရှားနိုင်ပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆေးကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်ကြောင်းအစီရင်ခံစာကဆိုသည်။
အလယ်အလတ်အရွယ်၌အမျိုးသားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်လိင်ကြင်ဖော်ဘက်အားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဖြင့်အစားထိုးကြသည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမရှိပဲအချိန်မရွေး၊ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာရရှိနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ လိင်ဆက်ဆံသူနှင့်သာသက်ဆိုင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုပြတ်လပ်မှုများရှိနိုင်သည့်အန္တရာယ်များနှင့်အတူပုံမှန် (အစစ်အမှန်) လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုအကင်းပါးပါးမှသိနိုင်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာမိတ်ဖက်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြားမှု၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများလိုအပ်မှုသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်မှုနှင့်နီးကပ်မှုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည် - စွဲစွဲလမ်းမှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်၊ ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အရည်အသွေးသည်မလုံလောက်ပါ၊ ဤသူများသည်ဖောက်ပြန်ခြင်းကိုခံယူတတ်ကြသည် (ဥပမာ sado-masochistic or zoophilous) ။
30) အင်တာနက်ကိုခေတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (2018)
DSM-IV-TR သည်အချို့သောအပြုအမူများကိုလောင်းကစားခြင်း၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းစသည့် hedonic အရည်အသွေးများနှင့်အချို့သောအပြုအမူများကို“ အခြားနေရာများတွင်ခွဲခြားထားခြင်းမရှိသော Impulse Control Disorders” အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ] ။ မကြာသေးမီကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတွင်အမူအကျင့်စွဲမှု၏အခန်းကဏ္suggestedကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုတွင်ပါဝင်သည့် neurobiological လမ်းကြောင်းများပြောင်းလဲခြင်းသည်အမျိုးမျိုးသောဇစ်မြစ်၏ထပ်ခါတလဲလဲ supernormal လှုံ့ဆော်မှုများ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်သည်။
31) Erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာ Related ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုရှိပါသလား? Cross-Section နှင့်ငုပ်လျှိုးနေကြီးထွား Curve ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း "(2019) မှစ. ရလဒ်များ
လူသားတို့ကိုကုန်းနှီးခဲ့သည့်သုတေသီ "ရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ"နှင့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ကအခိုင်အမာ"အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်အခြားစှဲကနေလုပ်ငန်းဆောင်တာ"ယခုညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED အားမိမိ Dexter လှည့်လိုက်ပါတယ်။ သော်လည်းဒီ ယောရှုသည် Grubbs-ရေးသားလေ့လာမှုများအကြားဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် နှစ်ခုလုံး porn စွဲ နှင့် လိင်ကမလှုပ်မရှားယောက်ျားနဲ့ ED နှင့်အတူအရှင်အများအပြားယောက်ျားဖယ်ထုတ်ပြီးစဉ် porn ကိုအသုံးပြုခြင်း ()ဒါဟာလုံးဝ porn-သွေးဆောင် ED (PIED) debunked မူလျှင်သည်အတိုင်း, စက္ကူဖတ်တယ်။ ဤသည်ခဲ့ကြောင်းသူ၏ "စပ်လျဉ်းဒေါက်တာ Grubbs များ၏အစောပိုင်းသံသယရှိတောင်းဆိုမှုများနောက်တော်သို့လိုက်ကြပါပြီသောသူတို့အားအံ့သြစရာမရှိပါအဖြစ်လာရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ"မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး။ ဒီကျယ်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရှုပါ အဆိုပါအချက်အလက်များသည်။
အဆိုပါ Grubbs စက္ကူတသမတ်တည်းမြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆင်းရဲတဲ့စိုက်ထူအကြားဆက်စပ်မှု downplays ဆက်စပ်မှုနေစဉ် ခဲ့ကြ အုပ်စု (၃) စုလုံးတွင်အစီရင်ခံခဲ့သည် - အထူးသဖြင့်နမူနာ (၃) အတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အများဆုံးနမူနာဖြစ်ပြီးအမြင့်ဆုံးညစ်ညမ်းမှုနှုန်းကိုအသုံးပြုသောကြောင့်အများဆုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောနမူနာဖြစ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ဒီနမူနာရဲ့အသက်အပိုင်းအခြား PIED အစီရင်ခံအများဆုံးဖွယ်ရှိသည်။ အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ၊ နမူနာ (၃) သည်အဆင့်မြင့်သောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောစိုက်ထူနိုင်မှုတို့အကြားအပြင်းထန်ဆုံးဆက်နွယ်မှုရှိသည် (-0.37)။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအုပ်စု (၃) ခုသည်ပျမ်းမျှနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသည့်မိနစ်အလိုက် porn ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစ erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အသုံးပြုမှုပမာဏအကြားဆက်စပ်မှုကိုပြသသည်။ အပျက်သဘောဆောင်သောလက္ခဏာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပိုမိုဆင်းရဲသောစိုက်ထုတ်မှုများကိုဆိုလိုသည်။
ဤရွေ့ကားမျှမျှတတရိုးရှင်းတဲ့ရလဒ်များကိုခဲ့ကြသည်။ porn အများဆုံးအသုံးပြုသောနမူနာ (# 3) သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော porn အသုံးပြုမှုနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောစိုက်ထူမှုများအကြားတွင်အကြီးမားဆုံးဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ အနည်းဆုံး (# 2) ကိုအသုံးပြုသောအုပ်စုသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော porn အသုံးပြုမှုနှင့်ဆင်းရဲသောစိုက်ထူမှုများအကြားအားအနည်းဆုံးဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ ဘာကြောင့် Grubbs သည်ဤပုံစံကိုသူ၏ရေးသားမှုတွင်အဓိကမထားသနည်း၊ ၎င်းကိုပျောက်ကွယ်စေရန်စာရင်းအင်းကိုင်တွယ်ခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ပါလော။
နမူနာ # ၁ - ပျမ်းမျှအသက် ၁၉.၈ ။ 19 နှစ်အရွယ် porn အသုံးပြုသူများကမရှိသလောက် (သာ 22 မိနစ်တစ်ရက်သုံးပြီးအထူးသဖြင့်အခါ) နာတာရှည် porn-သွေးဆောင်သတင်းပို့သတိပြုပါ။ ၏ကျယ်ပြန့်အများစု porn-သွေးဆောင် ED ပြန်လည်နာလန်ထူပုံပြင်များ YBOP 20-40 အသက်ယောက်ျားအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်ကိုစုဝေးစေခဲ့သည်။ ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့် PIED ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အချိန်ကြာပါတယ်။
နမူနာ # ၁ - ပျမ်းမျှအသက် ၁၉.၈ ။ သူတို့သည်တစ်နေ့လျှင်ပျမ်းမျှ ၁၃ မိနစ်သာရှိသည်။ စံသွေဖည်မှု ၁၅.၃ နှစ်နှင့်အတူဤလူများ၏အချို့သောအရာသည်ငါးဆဖြစ်သည်။ ဤသက်ကြီးရွယ်အိုများသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုမစတင်ခဲ့ကြပါ။ ယင်းကသူတို့၏လိင်မှုဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုတစ်ခုတည်းကိုသာအားနည်းစေခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ် Grubbs တွေ့ရှိခဲ့သည့်အတိုင်းအနည်းငယ်သက်ကြီးရွယ်အိုများအမျိုးသားများ၏လိင်ကျန်းမာရေးသည်အမြဲတမ်းပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာဒစ်ဂျစ်တယ်ညစ်ညမ်းမှုကိုစသုံးခဲ့တဲ့သုံးစွဲသူတွေထက်ပိုကောင်းတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်နမူနာ ၃ တွင်ပျမ်းမျှအသက် ၃၃ နှစ်ရှိသူများ။
နမူနာ # ၁ - ပျမ်းမျှအသက် ၁၉.၈ ။ ဖော်ပြပြီးခဲ့သည့်အတိုင်းနမူနာ ၃ သည်အကြီးမားဆုံးနမူနာဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုအသုံးပြုသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဒီအသက်အပိုင်းအခြားသည် PIED ကိုအစီရင်ခံရန်အများဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ၊ နမူနာ (၃) သည်အဆင့်မြင့်သောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောစိုက်ထူနိုင်မှုတို့အကြားအပြင်းထန်ဆုံးဆက်နွယ်မှုရှိသည် (-0.37).
Grubbs လည်း erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ porn စွဲရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်း။ ရလဒ် porn စွဲကြီးပင်အတော်လေးကျန်းမာ erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ထုတ်ဖေါ် သိသိသာသာ ဆက်စပ်သော ဆင်းရဲတဲ့ စိုက်ထူ (-0.20 မှ -0.33)။ အရင်ကဲ့သို့ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်ဆင်းရဲစိုက်ထူအကြား, အင်အားအကောင်းဆုံးဆက်စပ်မှု (-0.33) Grubbs ရဲ့အကြီးဆုံးနမူနာ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒါက porn-induced ED ကိုအစီရင်ခံရန်အများဆုံးပျမ်းမျှအသက်နမူနာဖြစ်သည်။ နမူနာ3ပျမ်းမျှအသက်: 33.5 (433 ဘာသာရပ်များ).
32) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးအမည်နှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏စစ်တမ်း (2019)
ဤလေ့လာမှုတွင်သုတေသီများသည် ED နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲလမ်းမှုညွှန်းကိန်းများအကြား“ တလိုတလား” မေးခွန်းတစ်ခုကို အသုံးပြု၍ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သော link ကိုဖွင့်လှည့်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ရပ်တန့်ခြင်းကိုမကြိုးစားမချင်းသူတို့၏“ တွန်းအား” အဆင့်ကိုတိတိကျကျမအကဲဖြတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အချို့သောအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆက်စပ်မှုများမှာသူတို့၏ရလဒ်များပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
…နေ့စဉ်နီးပါးသို့မဟုတ်ထိုထက်မကအသုံးပြုသောသူများသည် ED နှုန်း (၄၄%) ရှိ (၁၂/၂၇) ။ ၎င်းသည်ပိုမိုပေါ့ပါးသောသုံးစွဲသူများ (week44x / week) အတွက် ၂၂% (၄၇/၂၁၃) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကunivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေါ်သို့ရောက်ရှိအရေးပါမှုကို (p= 0.017) ။ ဒါဟာအသံအတိုးအကျယ်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိတစ်ကဏ္ဍမှပါမဖြစ်နိုင်သည်။
... PIED ၏အဆိုပြုထားသောရောဂါဗေဒသည်ယုတ္တိတန်သည်ဟုငါထင်ရသည်။ ဤသည်မှာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဘက်လိုက်မှုကလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်သေးငယ်သောသုတေသီများမဟုတ်ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးနောက်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူများအကြောင်းအငြင်းပွားမှု၏“ causation” ဘက်မှလည်းထောက်ခံသည်။
... ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောလေ့လာမှုများသာအကြောင်းတရားသို့မဟုတ်ဆက်စပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စကိုပြတ်သားစွာဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများတွင် ED ကိုကုသရာတွင်ကြားဖြတ်ခြင်း၏အောင်မြင်မှုကိုအကဲဖြတ်သည့်ကြား ၀ င်လေ့လာမှုများပါဝင်သည်။ အထူးထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုသည့်နောက်ထပ်လူ ဦး ရေတွင်ဆယ်ကျော်သက်များပါဝင်သည်။ ဂရပ်ဖစ်လိင်ဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုစောစီးစွာထိတွေ့ခြင်းသည်ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်း (၁၃) နှစ်မပြည့်မီညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှုနှုန်းသုံးဆတက်လာခြင်း အခုဆိုရင် ၅၀% ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်။
အမှန်တကယ်ကမ္ဘာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှညစ်ညမ်းပိုနှစ်သက်သူကိုလူပျိုတို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ထောင်ချောက်အတွင်းဖမ်းမိတွေ့ပါလိမ့်မယ်, အခွင့်အလမ်းကိုယ်နှိုက်ကတင်ဆက်သည့်အခါအခြားလူများနှင့်အတူလိင်ဖျော်ဖြေနိုင်ခြင်း, တစ်ဦးလေ့လာမှုအသစ်ကတင်ပြထားပါတယ်။ Porn စွဲအမျိုးသားများသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပိုမိုခံစားရလေ့ရှိပြီးလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုကျေနပ်မှုနည်းသည်။ ၎င်းသည်သောကြာနေ့ကဘော်စတွန်ရှိအမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောစစ်တမ်းတွေ့ရှိချက်များအရသိရသည်။
"ဒီအသက်အရွယ်ဆောင်များတွင်အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အော်ဂဲနစ်အကြောင်းတရားများနှုန်းအလွန်နိမ့်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီအုပ်စုအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတိုးလာတာကိုရှင်းပြဖို့လိုတယ်။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ထိုပဟေtoိတစ်ခုဖြစ်နိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
33) သစ်ခမည်းတော်၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်: လိင်နီးစပ်ခြင်းကိစ္စများ (2018)
ခေါင်းစဉ်သစ်တစ်ခုဆေးဘက်ကျောင်းစာအုပ်ထဲကနေဒီအခန်းမှာ အဖေဘက်က Postnatal စိတ်ရောဂါရောဂါ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏အိမ်ရှင်ကပူးတွဲရေးသားထားသောစာတမ်းတစ်ပုဒ်အား ကိုးကား၍ ဖခင်အသစ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအပေါ်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြသည်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ "ဒီ စာမျက်နှာသက်ဆိုင်ရာကောက်နှုတ်ချက်၏ screenshots များပါရှိသည် အခန်းကနေ။
34) ပိုလန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားများအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု၏ပျံ့နှံ့မှု, ပုံစံများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ခံစားသက်ရောက်မှု: တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု (2019)
အကြီးစားလေ့လာမှု (n = ၆၄၆၃) ယောက်ျားနှင့်မိန်းမကောလိပ်ကျောင်းသားများ (အလယ်အလတ်အသက် ၂၂ နှစ်) တွင်လိင်အရစွဲလမ်းမှုမြင့်မားခြင်း (၁၅%)၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်)၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ညစ်ညမ်းသောလိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးပြproblemsနာများကိုတင်ပြသည်။ သက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၏အသုံးများသောမိမိကိုယ်ကိုမြင်နိုင်သောဆိုးကျိုးများမှာပိုမိုကြာရှည်သောနှိုးဆွမှု (၁၂.၀%) လိုအပ်သည်။ ၎င်းတွင်အော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိရန်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ (၁၇.၆%) နှင့်လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုလျော့နည်းခြင်း (၂၄.၅%) လည်းပါ ၀ င်သည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုလည်းအကြံပြု ကြောင်းအစောပိုင်းထိတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအလားအလာ desensitization နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကြာကြာဆွများအတွက်လိုအပ်ချက်အားဖြင့်ညွှန်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများကိုစားသုံးသည့်အခါအော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိရန်နှင့်လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုယေဘုယျအားဖြင့်ကျဆင်းစေရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများပိုမိုလိုအပ်သည်...
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုပုံစံနှင့်ထိတွေ့မှုကာလအတွင်းပြောင်းလဲမှုအမျိုးမျိုးကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ တစ်ခုမှာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းအမျိုးအစားတစ်ခု (၄၆.၀%) သို့ကူးပြောင်းသွားသည်။ လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုနှင့်မကိုက်ညီသောပစ္စည်းများ (၆၀.၉%) ရှိသည်။ အချို့ကပိုမိုပြင်းထန်သည့် (အကြမ်းဖက်မှု) ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (၃၂.၀%) ။
35) ဆွီဒင် 2017 (2019) တွင်လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်အခွင့်အရေးများ
ဆွီဒင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ်စစ်တမ်းတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုဆွေးနွေးထားသည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်ဆံခြင်း၊ ကောက်နုတ်ချက်များ
အသက် ၁၆ မှ ၂၉ အတွင်းရှိအမျိုးသား ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ သူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုနေ့စဉ်သို့မဟုတ်နေ့တိုင်းနီးပါးစားသုံးကြသည်။ အမြိုးသမီးမြားအကြားသက်ဆိုင်ရာရာခိုင်နှုန်း 16 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များသည်မကြာခဏညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်ဆင်းရဲသောလိင်ကျန်းမာရေးတို့အကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြသသည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်လိင်များနှင့်လည်းဆက်စပ်မှုရှိသည်။ [လင့်ခ်များရှိခဲ့သည်] သိပ်မြင့်မားသောတဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်တဦးတည်းရဲ့လိင်ဘဝနှင့်အတူမကျေနပ်မှု။ လူ ဦး ရေ၏ထက်ဝက်နီးပါးကသူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုသည်သူတို့၏လိင်ဘဝအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ နှိုင်းယှဉ်မှုအရ၊ သုံးပုံတစ်ပုံသည်၎င်းကိုသက်ရောက်သည်ဖြစ်စေမထိခိုက်သည်။ အမျိုးသမီးများရောအမျိုးသားများပါရာခိုင်နှုန်းနည်းပါးသောကြောင့်သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့၏လိင်ဘဝအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အဆင့်မြင့်ပညာရှိသောအမျိုးသားများသည်အနိမ့်ပညာတတ်ယောက်ျားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမှန်မှန်သုံးလေ့ရှိသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအကြားဆက်စပ်မှုကိုပိုမိုသိရှိရန်လိုအပ်သည်။ အရေးကြီးသောကြိုတင်ကာကွယ်မှုအပိုင်းမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများကိုယောက်ျားလေးများနှင့်လူငယ်များနှင့်ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသည်ဤသို့ပြုလုပ်ရန်သဘာဝနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
36) အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: စွဲမှုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်? (2019)
အတွင်းအခန်း PDF ကိုမှ Link ကို Psychosexual ဆေးပညာမှနိဒါန်း (2019) - အဖြူ, ကက်သရင်း။ "အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: စွဲမှုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်။ Psychosexual ဆေးပညာမှနိဒါန်း? " (2019)
37) Abstinence သို့မဟုတ်လက်ခံ? ကိုယ်ပိုင်ခံစားပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Addressing အနေနဲ့ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးနှင့်အတူယောက်ျားရဲ့အတွေ့အကြုံများတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်စီးရီး (2019)
ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုစွဲကပ်နေသောအမျိုးသားခြောက် ဦး အကြောင်းသတိပြုခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း (တရားအားထုတ်ခြင်း၊ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းများနှင့်အပတ်စဉ်စစ်ဆေးခြင်း) အကြောင်းစာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဘာသာရပ် (၆) ခုစလုံးသည်တရားထိုင်ခြင်းမှအကျိုးရပုံရသည်။ လေ့လာမှုများ၏ဤစာရင်းနှင့်အညီ,6၏ 2, porn - သွေးဆောင် ED ဖော်ပြခဲ့သည်။ အနည်းငယ်သောအစီရင်ခံစာအသုံးပြုမှု (လေ့) ၏တိုးပွားလာ။ တစ်ခုမှာဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများကိုဖော်ပြသည်။ PIED ကိုအစီရင်ခံသည့်အမှုများမှကောက်နုတ်ချက်များ။
ပက်ဒရိုသည်အပျိုကညာအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ သူသည်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်အတိတ်ကကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ကြုံခဲ့ရသည့်အရှက်ကွဲခြင်းခံစားချက်များကိုပြောဆိုခဲ့သည်။ သူ၏မကြာသေးမီကဖြစ်နိုင်ချေရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုသည်သူ၏ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကသူ့ကိုစိုက်ထူခြင်းမှတားဆီးသည့်အခါအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သူကသူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းဖြင့်စွပ်စွဲခဲ့သည်။
ပါပလောသည်သူ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ သူသည်တစ်နေ့လျှင်နာရီပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုတက်ကြွစွာပါဝင်နေစဉ်သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုပြုလုပ်နေစဉ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုတွင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်တစ်နေ့လျှင်နာရီပေါင်းများစွာပါဝင်ခဲ့သည်။ သူသည်သူကြုံတွေ့နေရသည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိသောဆရာ ၀ န်သို့သွားခဲ့သည်။ သူသည်သူ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာဝန်ထံပြသခဲ့သည်။ ပါပလောအားအမျိုးသားမွေးဖွားမှုဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်အဖြစ်ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။ ပါပလောသည် testosterone ဟော်မုန်းကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည်အကျိုးမရှိဟုအစီရင်ခံခဲ့သည် သို့မဟုတ်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမှအသုံးဝင်မှုကို၎င်း, အနုတ်လက္ခဏာအတွေ့အကြုံကိုမိမိအညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူမည်သည့်နောက်ထပ်အကူအညီတောင်းထွက်ရောက်ရှိရာမှသူ့ကိုတားဆီး။ pre-လေ့လာမှုအင်တာဗျူးပါပလော, မိမိညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းဘယ်သူ့ကိုမှနှင့်အတူပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးစကားပွောနိုင်ခဲ့သည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည် ...
38) လာမည့်လေ့လာမှုများဖော်ပြဟောပြောခြင်း - Urology ပါမောက္ခ Carlo Foresta, မျိုးဆက်ပွား Pathophysiology ၏အီတလီ Society ၏ဥက္ကဋ္ဌတို့က
အဆိုပါဟောပြောပွဲ longitudinal နှင့် Cross- အပိုင်းလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုပါရှိသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်အထက်တန်းကျောင်းသားဆယ်ကျော်သက်များ (စာမျက်နှာ ၅၂-၅၃) ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းနှစ်ဆတိုးခဲ့ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနိမ့်ကျမှုမှာ ၆၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။
39) MedHelp မှတ်ချက်များနှင့်မေးခွန်းများ (ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမရှိ)
ဒီမှာ MedHelp အပေါ် posted မှတ်ချက်များနှင့်မေးခွန်းများကိုတစ်ခုကျယ်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြောင်းကိုဆောင်းပါး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုရည်မှတ်။ အဘယ်အရာကိုထိတ်လန်ရဲ့အကူအညီတောငျးလူ 58% 24 သို့မဟုတ်အငယ်ခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အတော်များများကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်မသင်္ကာ လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကိုမှာဖော်ပြထားတဲ့ -
အသုံးအများဆုံးသောစာပိုဒ်တိုများ "erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု" ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုအခြားစကားစုများထက်သုံးဆကျော်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ၎င်းနောက်တွင်“ အင်တာနက် porn”၊ “ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှု” နှင့်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်း” တို့ပါဝင်သည်။
ရှင်းနေသည်မှာ porn သည်မကြာခဏဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၆ နှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို (တစ်ပတ် ၄ ကြိမ်မှ ၅ ကြိမ်အထိ) မကြာခဏကြည့်ရှုခဲ့သည်။ "ကျွန်မအသက် ၂၀ အရွယ်ရောက်နေပါပြီ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုကျွန်တော်စလေ့လာတုန်းကဆယ်ကျော်သက်နှောင်းပိုင်းကတည်းကလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့စိုက်ထူဖို့နဲ့ထိန်းသိမ်းဖို့အခက်အခဲရှိခဲ့ပါတယ်။ "
၁။ Papagiannopoulos D, Khare N, Nehra A. “ အော်ဂဲနစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသောလူငယ်များကိုအကဲဖြတ်ခြင်း” andrology ၏အာရှဂျာနယ်။ 2015; 17 (1): 11-6 ။ EPub 2014 / 11 / 06 ။ Doi: 10.4103 / 1008-682x.139253 ။ PubMed PMID: 25370205; PubMed ဗဟို PMCID: PMCPmc4291852 ။
၂။ Martins FG, Abdo CH ။ အသက် ၁၈ မှ ၄၀ နှစ်အတွင်းရှိဘရာဇီးအမျိုးသားများတွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသည့်အချက်များဖြစ်သည်။ ” လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်တွင်။ 2010;7(6): 2166-73 ။ EPub 2009 / 11 / 06 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2009.01542.x ။ PubMed PMID: 19889149 ။
၃။“ အမျိုးသားတက်ကြွစွာပါဝင်သော ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဝင်များအကြားတွင် Erectile Dysfunction, US Armed Forces, 3-2004 ။ ” Msmr။ 2014; 21 (9): 13-6 ။ EPub 2014 / 10 / 01 ။ PubMed PMID: 25267600 ။
4. Wilcox SL, Redmond S, Hassan AM ။ စစ်ဘက် ၀ န်ထမ်းများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု - ခန့်မှန်းချက်နှင့်ခန့်မှန်းချက်များ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်တွင်။ 2014; 11 (10): 2537-45 ။ EPub 2014 / 07 / 22 ။ Doi: 10.1111 / jsm.12643 ။ PubMed PMID: 25042933 ။
၅။ Laumann EO၊ Paik A၊ Rosen RC ။ "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု - ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ခန့်မှန်းသူများ။ " ဂျေအေအမ်အေ: အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းဂျာနယ်တွင်။ 1999; 281 (6): 537-44 ။ EPub 1999 / 02 / 18 ။ PubMed PMID: 10022110 ။
6. Prins, ဂျေ, MH Blanker, AM Bohnen, အက်စ်သောမတ်စ်နှင့် JLHR Bosch ။ "Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့: လူ ဦး ရေ -based လေ့လာမှုများတစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်။ " သင်ျခြိုသုတေသနအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ် 14 မရှိ။6(ဒီဇင်ဘာလ 2002): 422-32 ။ Doi: 10.1038 / sj.ijir.3900905 ။
7. de Boer, BJ, ML Bots, AAB LycklamaaNijeholt, JPC Moors, HM Pieters နှင့် Th JM Verheij ။ "မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုအတွက် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ပျံ့နှံ့မှုနှင့်လူနာဝိသေသလက္ခဏာများ။ ENIGMA လေ့လာမှု။ ” သင်ျခြိုသုတေသနအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ် 16 မရှိ။4(ဖေဖော်ဝါရီလ 12, 2004): 358-64 ။ Doi: 10.1038 / sj.ijir.3901155 ။
၈။ Mialon A၊ Berchtold A၊ Michaud PA၊ Gmel G၊ Suris JC ။ လူငယ်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှု - ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များ။ ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးဂျာနယ်: ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆေးပညာများအတွက် Society ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်ဝေ။ 2012; 51 (1): 25-31 ။ EPub 2012 / 06 / 26 ။ Doi: 10.1016 / j.jadohealth.2012.01.008 ။ PubMed PMID: 22727073 ။
9. Capogrosso P, Colicchia M, Ventimiglia E, Castagna G, Clementi MC, Suardi N, et al ။ အသစ်တွေ့ရှိသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လူနာလေး ဦး တွင်တစ် ဦး သည်လူငယ်လူရွယ် - နေ့စဉ်လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုမှစိုးရိမ်ဖွယ်ရာရုပ်ပုံဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်တွင်။ 2013; 10 (7): 1833-41 ။ EPub 2013 / 05 / 09 ။ Doi: 10.1111 / jsm.12179 ။ PubMed PMID: 23651423 ။
10. O'Sullivan LF, Brotto LA, Byers ES, Majerovich JA, Wuest JA ။ လိင်မှုကိစ္စအတွေ့အကြုံရှိသောအလယ်အလတ်မှနှောင်းပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်လက္ခဏာများ။ ” လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်တွင်။ 2014; 11 (3): 630-41 ။ EPub 2014 / 01 / 15 ။ Doi: 10.1111 / jsm.12419 ။ PubMed PMID: 24418498 ။
၁၁။ Ivan Landripet, PhD နှင့် Aleksandar Štulhofer, PhD ။ “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လိင်ဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသလား။ (အတိုချုပ်ဆက်သွယ်ရေး) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်တွင်, EPub 2015 / 03 / 26 ။ Doi: 10.1111 / jsm.12853
၁၂။ Wilcox SL12, Redmond S, Davis TL ။ ။ “ လူငယ်စစ်တပ် ၀ န်ထမ်းများအကြားလိင်အင်္ဂါပုံ၊ လိင်စိတ်စိတ်နှင့် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ ” J ကိုလိင် Med။ 2015 ဧပြီ 30 ။ Doi: 10.1111 / jsm.12880 ။
13. Sutton, Katherine S. , Natalie Stratton, Jennifer Pytyck, Nathan J. Kolla နှင့် James M. Cantor ။ "Hypersexuality ရည်ညွှန်းအမျိုးအစားအားဖြင့်လူနာဝိသေသလက္ခဏာများ: 115 ဆက်တိုက်အထီးအမှုများကို၏အရေအတွက်ဇယားကိုပြန်လည်သုံးသပ်။ " လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ် 41 မရှိ။6(ဒီဇင်ဘာလ 2015): 563-80 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2014.935539 ။
Cambridge တက္ကသိုလ်ရှိ Valerie Voon အဖွဲ့
14. Voon V, Mole TB, Banca P၊ Porter L, Morris L, Mitchell S, et al ။ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မပါ ၀ င်သူများအတွက်လိင်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများ။ ” PloS တဦးတည်း။ 2014;9(7): e102419 ။ EPub 2014 / 07 / 12 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0102419 ။ PubMed PMID: 25013940; PubMed ဗဟို PMCID: PMCPmc4094516 ။
၁၅။ Carvalheira A၊ Traine B၊ Stulhofer အေ“ လိင်အင်္ဂါလျှော့ချထားသောလိင်အလိုဆန္ဒရှိသူစုံတွဲတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကဏ္ How မည်မျှရှိသနည်း။ ” ဂျေလိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ ournal။ 2014: 1-10 ။ EPub 2014 / 09 / 06 ။ Doi: 10.1080 / 0092623x.2014.958790 ။ PubMed PMID: 25189834 ။
၁၆။ Sun C၊ Bridges A၊ Johnason J, Ezzell M. “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ဆိုင်ရာဇာတ်ညွှန်း - စားသုံးမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း” လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 2014 ။ EPub 2014 / 12 / 04 ။ Doi: 10.1007 / s10508-014-0391-2 ။ PubMed PMID: 25466233 ။
၁၇။ Morgan, EM ငယ်ရွယ်သောအရွယ်ရောက်သူများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှုများ၊ အပြုအမူများနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအကြားဆက်စပ်မှုများ။ ဂျေလိင် Res ။ 2011, 48, 520-530 ။
18. Maddox, AM; Rhoades, GK; Markman, HJ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများကိုတစ် ဦး တည်းဖြစ်စေ၊ အတူတကွကြည့်ရှုခြင်း - ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ်မှု။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2011, 40, 441-448 ။
19. Bridges, AJ; Morokoff, PJ လိင်ဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာစုံတွဲများအတွက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်မှု။ Pers ။ Relatsh ။ 2011, 18, 562-585 ။
20. Stewart က, DN; Szymanski, DM ငယ်ရွယ်သောအရွယ်ရောက်ပြီးသောအမျိုးသမီးများ၏အမျိုးသားများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပါတနာ၏အပြာစာပေ၏အစီရင်ခံစာများသည်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ ဆက်နွယ်မှုအရည်အသွေးနှင့်လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုဆက်စပ်မှုတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ 2012, 67, 257-271 ။
21. Sun, C ။ ; မီဇန်, E ။ ; လီ, N. -Y ကို။ ; Shim, JW ကိုရီးယားအမျိုးသားအမျိုးသားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ သူတို့၏အစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့် Dyadic Sexual Relationships int ။ ဂျေလိင်။ ကျန်းမာရေး 2015, 27, 16-35 ။
၂၂။ လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုအပေါ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု - Zillmann - ၂၀၀၆ - အသုံးချလူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ် - Wiley အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် http://onlinelibrary.wiley.com/doi/22/j.2006-10.1111.tb1559.x/abstract (ဝင်ရောက်လာသောဇူလိုင် ၄ ရက်။ , 1816.1988) ။
၂၃။ Giovanni Castellini၊ Giovanni Corona၊ Egidia Fanni၊ Elisa Maseroli၊ Valdo Ricca နှင့် Mario Maggiအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုတကယ်မတည်ရှိပါသလား? တစ်ဦးလက်တွေ့ setting ကိုအတွက် compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ relational နှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု။ "
24. Voon V, Mole TB, Banca P, Porter L, Morris L, Mitchell S, et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မပါဘဲတစ် ဦး ချင်းစီ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများ။ PloS တ။ 2014;9(7): e102419 ။ Epub 2014/07/12 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0102419 ။ PubMed PMID: 25013940; PubMed ဗဟို PMCID: PMCPmc4094516 ။
25. Kuhn S၊ Gallinat ဂျေ ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဆက်သွယ်မှု - porn ပေါ်ရှိ ဦး နှောက်။ ဂျေအေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014; 71 (7): 827-34 ။ Epub 2014/05/30 ။ Doi: 10.1001 / jamapsychiatry.2014.93 ။ PubMed PMID: 24871202 ။
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုသုတေသနနုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်အတည်ပြု"
Pingback: ဘာကြောင့် porn ကသင့်ဘဝမှာဘာမှမရအောင်တားဆီးပေးတယ် - SELFCONQUERING
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်တာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဦး နှောက်ကိုပိုပြီးငယ်ရွယ်တဲ့ပြည်နယ်အဖြစ်သို့ရောက်သွားစေတယ်
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည် ဦး နှောက်ကိုချုံ့သည်
Pingback - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်တာကိုကြည့်ခြင်းက ဦး နှောက်ကိုဆိုးဝါးတဲ့အနေအထားရောက်စေနိုင်တဲ့ Non Perele
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဦး နှောက်ကိုကြီးမားသောအခြေအနေသို့ရောက်စေနိုင်သည်
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဦး နှောက်ကိုကြီးမားသောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိစေနိုင်သည် - WebInvestigator.KK.org - F. Kaskais
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ခြင်းအားကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အရွယ်မရောက်သေးသောပြည်နယ်တစ်ခုသို့ ဦး နှောက်ကိုနှိုးဆွပေးသည်
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကလေးငယ်များပြည်နယ်သို့ ဦး နှောက်ကိုနှိုးဆွပေးသည်
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လူငယ်များနေထိုင်သောပြည်နယ် - အိုအေစစ်သတင်းထောက်များကိုနှောက်ယှက်သည်
Pingback: porno infantiliza el cerebro
Pingback: Diario Sanitario သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုဖယ်ရှားပေးသည်
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဦး နှောက်သည်ငယ်ရွယ်သောပြည်နယ်တစ်ခုသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသည် - Uzalendo News
Pingback: Neuromarketing: ver porno infantiliza el cerebro | အမေရိကလက်လီ
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူ - PeriódicoPágina100
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ခြင်းအားကြည့်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုငယ်ရွယ်သောပြည်နယ်သို့ ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ဟုသိပ္ပံပညာရှင် Techsemut ကပြောကြားသည်။
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ခြင်းအားကြည့်ခြင်း ဦး နှောက်ကိုပိုမိုငယ်ရွယ်သောပြည်နယ်သို့ပြောင်းရွှေ့ပေးနိုင်သည်ဟုသိပ္ပံပညာရှင် - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတိုင်းမ်သတင်းစာကပြောကြားသည်
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ခြင်းအားကြည့်ခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်ကိုပိုမိုသေးငယ်သောပြည်နယ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်ဟုသိပ္ပံပညာရှင်ကပြောကြားသည်။
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ခြင်းအားကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ငယ်ရွယ်သောပြည်နယ်တစ်ခုသို့ ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ဟုသိပ္ပံပညာရှင်ကပြောကြားသည် ဗိုင်းရပ်စ်၏ဆေး
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းသည် 'ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးငယ်များအားကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း'၊ dice un científico | ကောင်းကင်
Pingback: အပြာဓါတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း - ALMI
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လူငယ်တစ် ဦး ပြည်နယ် - ဗိုင်းရပ်စ်ပါဝင်သည့်ကလပ်သို့ ဦး နှောက်ကိုနှိုးဆွပေးသည်
Pingback: ポルノは脳にに深刻なな影響を及及ぼします。 | ig
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာ - ကစားသမား 8
Pingback: ograf pornografía de manera ကိုပုံမှန်စားသုံးပါသလား။ PerródicoPágina100 - Podrías estarle haciendo estoatu cerebro
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ခြင်းအားကြည့်ခြင်းဖြင့်အရွယ်မရောက်သေးသောပြည်နယ်တစ်ခုသို့ ဦး နှောက်ကိုနှိုးဆွပေးသည် Gizmodo သြစတြေးလျ
Pingback: လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဖျက်ဆီးခြင်းမှကာကွယ်နည်း | မော်စကို, ID, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ WISH
Pingback: ВПЛИВПОРНОГРАФІЇНАФОРМУВАННЯОСОБИСТОСТІ | အေсоціаціясексологівтасексотерапевтівУкраїни
Pingback: porno způsobiterektilní dysfunkci? | NePornu zs
Pingback- Masturbasi ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသလား။ Baca Dulu Artikel Ini - Skinolla
Pingback- တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းဆိုင်ရာ သင့်ဦးနှောက် - info24.news
Pingback: Pornosuht လား? Weitere Nachteile und ရောဂါလက္ခဏာ - Pornosucht Besiegen